09/25/13 ~ Myanmar Forward
(၁၅)နှစ်သမီးကို တရုတ်ပြည်ရှိ အနှိပ်ခန်းတွင် အဓမ္မစေခိုင်းဖို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သူများအား ဖမ်းမိ
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under မှုခင်း | No comments
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်က (၁၅)နှစ်အရွယ် သမီးကို မဝင်းစန္ဒာအေး(ခ)ဝတ်မှုံ(၂၆)နှစ် ဝါးရုံဆိပ်ကျေးရွာ ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ် နေသူက ဗန်းမော်မြို့ရှိ ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် တစ်လလျှင် လစာ ကျပ်တစ်သိန်းခွဲထိ ရမည်ဟု ပြောဆို စည်းရုံးခဲ့သည်။
ထို့နောက် သမီးငယ်ဖြစ်သူအား အမည်မသိ ထမင်းချက် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့မှ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း ၊ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ရာတွင် မန္တလေးသို့ ရောက်နေကြောင်း၊ မဝင်းစန္ဒာက တရုတ်ပြည်ထဲသို့ ဆက်လက် ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်၍ မလိုက်လိုကြောင်း ပြန်လာခေါ်ရန် ပြေားကြားခဲ့သည်။
မိခင်က စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ လွယ်ဂျယ်မြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ဗန်းမော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့မှတစ်ဆင့် လွယ်ဂျယ်မြို့သို့ ပါဂျဲရိုးကားတစ်စီးဖြင့် သွားရောက်စဉ် လမ်းခရီးတွင် မချိုထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ရာ ၎င်းက “ရှင်ဘာလာလုပ်လဲ၊ ဒီမှာ အဖမ်းအဆီးတွေ ရှိတယ်၊ ရှင့်သမီးနဲ့ပြော” ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် သမီးဖြစ်သူက “အမေအမြန် လာခေါ်ပါ၊ ထမင်းဆိုင်မှာ အလုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အနှိပ်ခန်းမှာ လုပ်ရမှာ” ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနှင့် မချိုဆိုသူက “ဒီအတိုင်းပြန် ခေါ်လို့ မရဘူး၊ လမ်းစရိတ်ပြန်လျော် ရမည်” ဟု ပြောဆိုပြီး ဖုန်းချသွားခဲ့သည်ဟုလည်း မိခင်က တိုင်တန်းရာတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
သူမက လွယ်ဂျယ်မြို့ရှိ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံအကူအညီ တောင်းပြီး သမီးငယ်အား ထမင်းဆိုင်တွင် အလုပ်ရမည်ဟု လိမ်လည်ပြောဆိုခေါ် ဆောင်၍ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ မတရားပို့ ဆောင်ပေးသူ မဝင်းစန္ဒာအေးနှင့် ထမင်းဆိုင်၊ ကာရာအိုကေဆိုင် ဗန်းပြ အနှိပ်ခန်းတွင် အတင်း အကျပ်စေ ခိုင်းသူ ဆိုင်ရှင် မချိုတို့အား အရေးယူပေးရန် အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် လွယ်ဂျယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် အမှုနှင့် ဖမ်းဆီးမိထားသူ မဝင်းစန္ဒာအေး၊ မချို (ခ) မမြင့်မြင့်ဦးတို့အား ကြည့်မြင့်တိုင်ရဲစခန်းသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ယင်းအမှု အား ကြည့်မြင်တိုင်ရဲစခန်းက (ပ)၆၅၈/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး ဖမ်းဆီးရမိထားသူများအား ဆက်လက် စစ်ဆေးနေပြီး ပြစ်မှုထင်ရှား ပေါ်ပေါက်ပါက ပုဒ်မ ၂၄ဖြင့် တရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်မည်ဟု တိုင်းရဲဌာနက ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအမှုနှင့် တဆက်တည်းဖြစ်သူ ဒေါ်ချို (ခ) မြင့်မြင့်ဦး (ခ) ချိုချိုမြင့်၊ အေးရွာ၊ ကြည့်မြင်တိုင်နှင့် လိမ်လည် ခေါ်ဆောင်သူ ဒေါ်သီတာ (ခ) ဖြူဖြူမော် တို့ကိုလည်း အမျိုးသမီး နှစ်ဦးအား အနှိပ်ခန်းတွင် လစာမပေးဘဲ စေခိုင်းထားမှုဖြင့် ရွှေပေါက္ကံနယ်မြေ ရဲစခန်းကလည်း (ပ) ၁၇၇/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ပုဒ်မ ၂၄ ဖြင့် တရားစွဲတင်နိုင်ရန် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု တိုင်းရဲဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြေပုံမှ ရေလုပ်သား နှစ်ဦး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ရေထဲပစ်ချခံရ
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့မှ ရေလုပ်သား (၂) ဦးကို အကြမ်းဖက်သမား အုပ်စု တစ်ခုက တိုက်ခိုက်ပြီး ရေထဲ ပစ်ချ ထားခဲ့သဖြင့် အကြီင်္းအကျယ် ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကာ ဆေးရုံတင်ထားရသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဒဏ်ရာ ရရှိသွားသူ ရေလုပ်သား (၂) ဦးမှာ မြေပုံမြို့ မြောက်ပိုင်းမှ ဦးမောင်လှဝင်းနှင့် ဦးအမူံချေ ဆိုသူတို့ ဖြစ်ကြ သည်ဟု မြေပုံမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဝင်းက အတည်ပြု ပြောကြား သည်။
သူတို့သည် ငါးဖက်စက်လှေ တစ်စီးဖြင့် ပြန်လာစဉ် ပေါက်တောမြို့နယ်ဘက်ကဟု ယူဆရသော မွတ်ဆ လင် စက်လှေ တစ်စီး၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်ဟု ဦးအောင်ဝင်း ပြောသည်။
“ အခု အဲဒီ လူနာ (၂) ဦးကို မြေပုံ ဆေးရုံမှာ တင်ထားရပါတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ စကား အနည်း ငယ် ပြောနိုင်ပြီး တစ်ယောက်ကတော့ စကား မပြောနိုင်သေးဘူး။ သူတို့ ပြန်လာစဉ်မှာ ပေါက်တော ဘက်က ဘင်္ဂလီငါးဖမ်းစက်လှေ တစ်စီးက ၀င်ဆီးပြီး တိုက်ခိုက်တယ်။ လှေပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ လူနှစ်ဦး ဖမ်းတယ်။ ရိုက်ပုတ်တယ်။ တစ်ဦးကို ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး ရေထဲကို ပစ်ချတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မသေဘဲနဲ့ ပြန်လွှတ်မြောက် လာကြပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ဖြစ်ပွားပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို ပိုမို သိရှိနိုင်အောင် မြေပုံရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အဆက် အသွယ် မရရှိခဲ့ပါ။
မြေပုံမြို့မှ NLD အဖွဲ့ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ရခိုင် ရေလုပ်သား နှစ်ဦး တိုက်ခိုက် ခံရပြီး ယနေ့ နံနက် ၅ နာရီကျော်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။ “ သူတို့ စက်လှေ ကို ရေထဲနစ်ပစ်ပြီး စက်လှေပေါ်က စက်နဲ့ ပိုက်တွေကို အကုန်လုံး ယူဆောင်သွား ခဲ့တယ်။ ကျနော်ကြားတာက ဂျီအာရ်စီဆိုတဲ့ အန်ဂျီအို တစ်ခုက မြေပုံက ဘင်္ဂလီတွေကို ငါးဖမ်း စက်လှေ (၅၀) ကူညီပေးထားတယ်။ အဲဒီ စက်လှေနဲ့ တိုက်ခိုက်ပြီး ခုလို လုပ်တာလို့ သိရပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း ဂျီအာရ်စီက အကူအညီပေးထားသော စက်လှေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း ဟုတ် မဟုတ်ကို နိရဉ္စရာက အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
နောက် မြေပုံမြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ဖြစ်သူဦးမောင်လုံးအား ဆက်သွယ် မေးမြန်း ရာ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားခြင်းမှာ ဟုတ်မှန်ပြီး ပေါက်တောက ဘင်္ဂလီ အုပ်စုလား၊ မြေပုံ ကလား ဆိုသည် ကို ရဲက ဆက်လက် စစ်ဆေးမူများ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ ခရီးလွန်နေ၍ ဦးအောင်ဝင်းကိုသာ ဆက်သွယ် မေးမြန်းပါဟု ပြောကြားကာ ဖုံးချသွားခဲ့သည်။
ယခု တစ်လောတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းတွင် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ၏ တိုက်ခိုက်မူကို ရခိုင်အမျိုး သားများ ဆက်တိုက် ခံနေကြရပြီး အာဏာပိုင်များက ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ် မပေးနိူင်ဘဲ ဖြစ်နေကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
(နိရဉ္စရာ- ၂၅ စက်တင်္ဘာ ၂၀၁၃)
မိတ်္ထီလာမြို့၌ ညသန်းခေါင် အချိန် အိမ်ပေါ်တက်၍ ခြိမ်းခြောက် လုယက်မှု ဖြစ်ပွား
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မိတ်္ထီလာမြို့ စက်မှုဇုန်(၃)လမ်းရှိ ဦးစိုးမြင့် နေအိမ်၌ ယမန်နေ့ ည ၁၁ နာရီက ခေါင်းစွပ်အနက်နှင့် ပုဆိုးခြုံထားသူ တစ်ဦးမှ အိမ်ပေါ် တက်၍ စာကျက်နေသူ မ----အား နောက်မှ သိုင်းဖက်၍ ခြိမ်းခြောက် လုယက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မိတ်္ထီလာမြို့ စက်မှုဇုန်(၃)လမ်းရှိ ဦးစိုးမြင့် နေအိမ်တွင် ၎င်း၏ သမီးဖြစ်သူ မ----- ၂၁ နှစ် ဒုတိယ နှစ် (စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ မိတ်္ထီလာ)မှ နေအိမ် ဧည့်ခန်း၌ စာကျက်နေစဉ် ခေါင်းစွပ်အနက်နှင့် ပုဆိုးခြုံ ထားသူ တစ်ဦးမှ မ-----အား နောက်မှ သိုင်းဖက်၍ လက်ဖြင့် ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ““အော်လျှင် သတ်ပစ်မည်””ဟု ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့ရာ မိခင်ဖြစ်သူ ရောက်ရှိ လာခဲ့သဖြင့် အမည်မသိ လူမှ လူမသတ်ချင်ကြောင်း၊ ပစ္စည်း ထုတ်ပေးရန် ပြောဆိုပြီး မ-----၏လည်ပင်းမှ ရွှေဆွဲကြိုးအား ဖြုတ်ယူ နေစဉ် ၎င်း၏ဖခင် ဦးစိုးမြင့် ရောက်ရှိ လာပြီး ချိုင်းထောက်ဖြင့် ရိုက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အော်ဟစ် အကူအညီ တောင်းခံခဲ့ရာ လုယက် သူမှာ ထွက်ပြေး သွားခဲ့ကြောင်း၊ လုယက်သူ၏ ပုဆိုးမှာ နေအိမ် အတွင်း ကျန်ရစ် ခဲ့ပြီး မျက်မြင် သက်သေ များ၏ ပြောကြားချက်အရ လုယက်သူမှာ ဦးစိုးမြင့်၏ နေအိမ်တွင် လွန်ခဲ့သော သုံးလခန့်က မြက်ရှင်း လုပ်ငန်း လာရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူ ဦးစိုးမြင့်၏ နေအိမ်နှင့် မျက်နှာချင်း ဆိုင်ရှိ ဦးဝင်းမြင့် ရက်ကန်းရုံမှ ရက် ကန်း လုပ်သား အောင်အောင် ၂၂ နှစ်(ဘ)ဦးဝင်းဆွေ စက်မှုဇုန်ရပ်ကွက် မိတ်္ထီလာမြို့နေသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ်(၃)ရဲစခန်းမှ အိမ်တက် ခြိမ်းခြောက် လုယက်သူ တရားခံ အောင်အောင် အား(ပ)၉၂/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ၃၉၃ အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ စစ်ဆေးဆောင်ရွက် လျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under သတင်းများ | No comments
လတ်တလော မစပ်စု စိတ်ဝင်စားမိ တာကတော့ Facebook စာမျက်နှာထက်မှာ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ပိုင်းရော၊ သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာပါ အံ့သြရလောက်အောင် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ရိုက်ကူး ပြသတတ်လို့ လူသိများတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဇွန်သဉ္ဖာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ၂၀၁၃ ခုနှစ် အစပိုင်းလောက် မှာ ဂျွန်လွင်ရဲ့ Stars & Models Agency က သင်တန်းဆင်း ခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်သဉ္ဖာက မှော်ဘီ GTC ကနေ B.E ရော M.E ပါဘွဲ့များပါ ရယူခဲ့ပြီးမှ မော်ဒယ်လ် လောကကို ၀င်ရောက်လာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တင်ကျလွန်းတဲ့ Sexy ဓာတ်ပုံတွေကိုသာ ရိုက်ကူးနေပေမယ့်၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ပိုပြီး သဘောကျ ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဇွန်သဉ္ဖာက “ဿွာနတ္တ”ဆိုတဲ့ ဗီဒိယို ဇာတ်ကားကို ခေါင်းဆောင်မင်း သမီးအဖြစ် ရိုက်ကူးထားပြီး တခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကား အနည်းငယ်မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
Sexy ကျလွန်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်က တခြားဝက်ဘ်ဆိုက် တွေမှာပါ သူ့ဓာတ်ပုံတွေကို ဖော်ပြခံနေရတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဇွန်သဉ္ဖာရဲ့ Facebook မှာ သူငယ်ချင်း ငါးထောင်နီးပါးရှိပြီး Followers ပေါင်း ၂ သောင်း နီးပါး ရှိနေပါတယ်တဲ့။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ Nicki Minaj (အမေရိကန် အမျိုးသမီး Rap အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်) လို့ လူသိများတဲ့ တောင်ကြီးသူ ဇွန်သဉ္ဖာကို သူရိုက်ဖြစ်နေတဲ့ Sexy ဓာတ်ပုံတွေ ဘာကြောင့် ဘယ်လို ရိုက်ဖြစ်နေလဲ၊ ဒီအပေါ်ကိုရော သူ့ရဲ့ ခံစားချက် ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် မစပ်စုက မေးမြန်းစပ်စု ထားပါတယ်။
မေး။ ။ အခုလို အမူအရာပိုင်းနဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ပိုင်းမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေကို ဘာကြောင့် Facebook ပေါ် တင်ဖြစ်ရတာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အစကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ပုံတွေကို ဒီအတိုင်း ရိုက်ပြီးတင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အားပေးတဲ့သူတွေ များလာတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ကလည်း ဒီလိုပုံစံမျိုးကို ကြိုက်တဲ့အတွက် ထပ်ပြီးတော့ Sexy ပုံစံတွေပဲ ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။ ကိုယ့်မျက်နှာက Cute လည်း မဖြစ်ဘူး၊ Cute ပုံစံက ကိုယ်နဲ့လည်း မလိုက်တဲ့အတွက်၊ ကိုယ့်မှာလည်း အားသာချက်က ခန္ဓာကိုယ် အလှ ရှိတဲ့အတွက် Sexy ပိုင်းကို ဦးစားပေးရင်းနဲ့ တောက်လျှောက် Sexy ပုံစံပဲ ဖြစ်သွားတာပါ။ နောက်ပိုင်းလည်း အဲဒီလို Sexy ပုံတွေပဲ ရိုက်ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး ပြောကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း Sexy ပုံတွေပဲ ရိုက်စေချင်တာ များတော့ သူတို့အားပေးတဲ့ နောက်ကို လိုက်ရင်းနဲ့ Sexy ပုံတွေပဲ ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။
မေး။ ။ ဇွန်သဉ္ဖာ ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက Facebook မှာပဲ သုံးဖို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာရော အသုံးပြုဖို့ သီးသန့် ရိုက်ဖြစ်တာမျိုးကော ရှိလား။ ဒီလို ဓာတ်ပုံတွေကို ပြည်တွင်း ဂျာနယ်တွေမှာကော သုံးလို့ရလား။
ဖြေ။ ။ အရင်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ၀ါသနာပါလို့ ရိုက်ဖြစ်တာရှိတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျတော့ ဂျာနယ်အတွက် ရိုက်ပေးတာတွေ များပါတယ်။ ဂျာနယ် လေးငါးခုလောက် အတွက် ရိုက်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဂျာနယ်မှာ မပါခင် Facebook မှာ ကိုယ်က အရင်တင်ဖြစ်တယ်။ Facebook မှာ အရင်သုံးတယ်။ တချို့ကျတော့ Facebook မှာ အရင်တင်ပြီးတော့မှ ဂျာနယ် အတွက် ဓာတ်ပုံလိုချင်တယ် ဆိုတော့မှ Facebook ကပုံကို ပေးလိုက်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ပုံတွေက နှစ်မျိုးစလုံး အတွက် အဆင်ပြေတယ်။ Facebook မှာလည်း သုံးတယ်၊ ဂျာနယ်အတွက် လည်းသုံးပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေကျတော့ သူတို့ဘက်က လာကမ်းလှမ်းတော့မှ Facebook မှာ ရှိပြီးသား၊ ပေါက်ပြီးသား ပုံလေးတွေ ပေးလိုက်ဖြစ်တာပေ့ါ။ သူတို့အတွက် သက်သက် မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပေ့ါ။ တချို့ အရမ်း ဟော့တာတွေ ကျတော့ သူတို့မထည့်ရဲတာလည်း ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် တချို့ကျတော့ ထည့်ရဲတယ်။ ကျမ ရိုက်ထားတဲ့ အပေါ်က ဘရာအနက်နဲ့ ရက်ပါ ပုံစံဆိုရင် ဂျာနယ်တခုက ထည့်မယ်လို့ ပြောတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ထည့်ရဲတယ်၊ တချို့ကျတော့လည်း မထည့်ရဲဘူး။ အဲဒီလိုတော့ ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ဇွန်သဉ္ဖာ ရဲ့ Facebook က ဓာတ်ပုံတွေကို တချို့လူတွေက ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောထားတာတွေ တွေ့ရတော့ အဲဒီ အပေါ်ကိုရော ဘယ်လို သဘောရလဲ။ ဒီလိုပုံတွေ ရိုက်ရင်၊ တင်ရင် ဒီလို ပြောကြမှာပဲ ဆိုတာကို သိရက်နဲ့ တင်ဖြစ်တာလား။
ဖြေ။ ။ တချို့တွေ တော်တော် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ရေးထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အရမ်းကြီး ကိုယ်မခံနိုင်လောက်တဲ့ အရာမျိုး ဆိုရင်တော့ သူတို့ကို ဘာမှ ပြန်ပြော မနေတော့ဘူး။ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ဘလော့ဂ် လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ ရေးထား တာတွေက အရမ်းကြီး မရိုင်းဘူး။ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ ပုံနဲ့လည်း သူတို့စာတွေက စပ်ဆက်မှု ရှိနေတယ် ဆိုရင် သူတို့က အချိန် ပေးပြီး ကိုယ့်ကို လာရေးပေးထားတဲ့ အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့ ကွန်မန့်တွေကို Delete မလုပ်ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ထားတာ များ တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကျတော့လည်း ပြောတယ်၊ အရမ်းမရိုင်းပေမယ့် ဖျက်ပစ်လိုက်ပေ့ါ။ ကိုယ်က မဖျက်ချင်ဘူးဆိုတာ သူတို့ကို Respect ပေးတာပေ့ါနော်။ သူတို့ အချိန်ကုန်ခံပြီး ကျမ ပေ့ခ်ျကို ကွန်မန့် လာပေးထားတဲ့ အချိန်အတွက် လေးစားတဲ့ အနေနဲ့ မဖျက်ပါဘူး။ သိရက်နဲ့ လုပ်ဖြစ်တာပါ။ လူတွေ ဝေဖန်မယ်၊ မျိုးစုံပြောမယ် ဆိုတာလည်း ကြိုသိတယ်။ အဲဒီလိုပဲ သူတို့ပြောသလို အားပေးတဲ့ သူတွေကလည်း ရှိနေတော့ လုပ်ချင်တာကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ များသော အားဖြင့် သူတို့ ပြောတာတွေကို သိသိနဲ့ လုပ်တာများပါတယ်။
မေး။ ။ ဒါကို နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်တာလားဆိုတဲ့ အမေးအပေါ် ဇွန်သဉ္ဖာ ဘက်က ဘာပြောစရာရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်တာ ပါပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်က နာမည်ကြီး သွားမယ်၊ Facebook ကနေ လူသိများမယ်၊ အဲဒီကနေတဆင့် အနုပညာလောကက ဒါရိုက်တာတွေ၊ အနုပညာ သမားတွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုရမယ်။ အဲဒီကနေမှ အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်နိုင်တယ်ပေ့ါ။ ပြီးတော့ မြန်မြန် နာမည် ကြီးချင်လို့ ထိုးဖောက်တာ လည်း ပါပါတယ်။ ကိုယ်က ဘွဲ့ရပြီးပြီ၊ အသက်ကလည်း ၂၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ၁၆ နှစ် သမီးလောက်က စလုပ်တာ ဆိုရင်တော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း သွားလို့ရပေမယ့် ကိုယ့်အသက် အရွယ်နဲ့ကျတော့ အဲဒီလို တဖြည်းဖြည်းချင်း သွားနေရင် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာဆိုတော့ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ နောက် ကိုယ့်ကို အနုပညာ လုပ်ခွင့်ကလည်း အိမ်က တနှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက်ပဲ ခွင့်ပြုထားတာ ဆိုတော့ အဲဒီအတောအတွင်း လေးကို မြန်မြန်လေး ပေါက်သွားအောင် ဆိုပြီးတော့ ဖြတ်လမ်းနည်း လုပ်ကြည့်တဲ့ သဘောလည်း ပါပါတယ်။ အိမ်က နှစ်နှစ်လောက် နေပြီးတော့မှ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ မိဘတွေက ပညာရေးဘက်ကို ပြန်လုပ်စေချင် ပါတယ်။ အဲဒီကျရင် ကိုယ်ကလည်း တခုခုတော့ ပြန်စဉ်းစားရမှာပေ့ါ။ အဲဒါကတော့ လောလောဆယ် ဆက်လုပ်ဖြစ်၊ မလုပ်ဖြစ် ဆိုတာကတော့ အတိအကျ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။
မေး။ ။ တခြား နိုင်ငံတကာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ မတူဘဲ မြန်မာမိန်းကလေး ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက် စည်းတွေ ဘောင်တွေများ လွန်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုး မိန်းကလေး တယောက်အနေနဲ့ အခုလို Sexy ဆန်တဲ့ Pose တွေကို လုပ်နိုင်တဲ့ ဇွန်သဉ္ဖာရဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်လို ရှိမလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိကက လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကလည်း ပရိသတ်က Facebook က စပြီး တောင်းဆိုလို့ပါ။ သူတို့ရဲ့ တောင်းဆို ချက်ကြောင့် ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ရဲသွားတာပါ။ သူတို့သာ ဆက်အားမပေးဘူး ဆိုရင် လုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်သွား မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပုံတပုံ တင်လိုက်ရင် သူတို့အားပေးတဲ့ Like တွေ Comment တွေက ဆက်လုပ်ဖို့ အတွက် အများကြီး ဖြစ်စေပါတယ်။ အဓိကကတော့ သူတို့ကြောင့်ပါပဲ။
မေး။ ။ Sexy ဆန်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ ဘေးမှာ များသောအားဖြင့် တွေ့ရတတ်တဲ့ ကွန်မန့်တွေက ဒီလောက်တောင် ပြချင် နေရင် နိုင်ငံဂုဏ်လည်း ဆောင်နိုင်မယ့် နိုင်ငံတကာ မယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ ဖော်ချွတ် ပြပါလားဆိုတဲ့ အပြောတွေပါပဲ။ အဲဒီအပေါ်ကိုရော ဘယ်လို သုံးသပ်ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ သူတို့ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ဒီလိုမျိုးပြိုင်စေချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အနေနဲ့ ကျတော့ အဲဒီလောက်အထိ ယုံကြည်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီလို ၀င်ပြိုင်ပြီးတော့ မရတဲ့အခါမှာ ဖြစ်လာမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုလည်း မခံစားနိုင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် များသောအားဖြင့် ပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်မပြိုင်ဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့် ပုံစံကလည်း မော်ဒယ်လ် တယောက်နဲ့ မတူဘဲ မယ်တယောက်လို ဖြစ်နေတော့ စင်ပေါ်မှာ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတကာက မော်ဒယ်လ်ပုံစံတွေပဲ ရွေးတော့လေ မရနိုင်ဘူးလို့ တွက်ထားလို့ မပြိုင်ဖြစ်တာလည်း ပါပါတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံတကာ မှာလည်းရှိပါတယ်။ လိင်အသားပေး ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေသာ သီးသန့်ရိုက်ကူးလေ့ ရှိတဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ဆိုတာပေ့ါ။ ဆိုတော့ ဇွန်သဉ္ဖာ ဖန်တီးချင်တဲ့ ရှေ့လျှောက် အနုပညာပုံရိပ်က ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမ အဓိက ဖြစ်ချင်တာကတော့ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်ချင်တာပါ။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ဦးတည်ရင်းနဲ့မှ မော်ဒယ်လ်လည်း ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်လို့ မော်ဒယ်လ် သင်တန်းတွေတက်ပြီး Facebook ကိုလည်း ဓာတ်ပုံတွေ တင်ဖြစ်တာပါ။ အဓိကကတော့ သရုပ်ဆောင် လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းကျရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ဒါကတော့ ဓာတ်ပုံ အနေနဲ့ ရိုက်တာပေ့ါ။ Sexy photo အနေနဲ့ Sexy pose အနေနဲ့ပဲ ရိုက်မှာပါ။ လိင်အသားပေးတို့ ဘာတို့ အထိတော့ သွားဖို့မရှိပါဘူး။ Sexy ဆိုရင် တော့ Sexy လိုင်းတလိုင်းပဲ ရိုက်မယ်။ ဖြစ်ချင်တာကတော့ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်တဲ့အတွက် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ဦးစားပေးပြီး လှုပ်ရှားသွားဖို့ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာကို သွားပြိုင်နေတဲ့ မယ်တွေကိုတောင် ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ တွေ့ရင် အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ချင် နေတာဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်ကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမကတော့ သဘောကျပါတယ်။ မိန်းမတယောက်ရဲ့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ တကယ့်အလှကို အဲဒီတော့မှ အစအဆုံး မြင်ရတာပါ။ မယ်တယောက်ရဲ့ အလှအပကို ဒီလို ၀တ်ပြီးပြတယ်၊ ဒါကို စိတ်ထဲမှာ ဟော့တယ်၊ ရိုင်းတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ အရင်ခေတ်က မယ်တွေလည်း ဒီလိုမျိုး ၀တ်ခဲ့ရတာ ဆိုတော့လေ။ သူတို့ အခုလို နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်တဲ့ အခါမှာ ဒီလို ၀တ်တယ် ဆိုတာကလည်း ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးမှာ ချွင်းချက် မရှိအောင် လှတယ်ဆိုတာကို ပြသတဲ့အတွက် သဘောကျ ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး မယ်တွေအနေနဲ့ ရေကူးဝတ်စုံ ၀တ်ပြီး ပြိုင်ရတဲ့အခါ မြန်မာပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ ၀ိုင်းပြီး ဝေဖန်ကြ တယ်ပေ့ါ။ သူတို့ ပြောတာတွေကို စိတ်ထဲမှာ ထားမနေဘဲ ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာကို ရှေ့ဆက် လုပ်သွားရမယ်လို့ ကျမ ခံယူပါတယ်။ ဒီလို ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ အလှအပ အကုန်လုံးကို ပြခွင့်ရတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဂုဏ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အတွက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဂုဏ်ယူရမှာ၊ ကိုယ့်အလှကို ကမ္ဘာကို ချပြခွင့် ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူရမှာပါ။ အမြင်မတူသူတွေ ကတော့ ရှိမှာပေ့ါလေ။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံး အကြိုက်ကို လိုက်ဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာကို ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ် ရှေ့ဆက်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ ။
ရှစ်လအတွင်း လူကုန်ကူးခံရသူအမျိုးသမီး တစ်ရာကျော်ရှိ
ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဩဂုတ်အထိ ရှစ်လအတွင်း လူကုန်ကူးခံရသူများတွင် အမျိုးသမီးဦးရေမှာ တစ်ရာကျော် ရှိနေကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က ပြောကြားလိုက်သည်။
ဩဂုတ်လအထိ လူကုန်ကူးမှု ၆၄ မှုတွင် အမျိုးသမီး လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၁၈ ဦးရှိသည်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်က အဆိုပါရှစ်လအတွင်း ၈၂ မှုတွင် လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၄၉ ဦး ရှိခဲ့သည်။
“စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ အသက် ၁၄ နှစ်နဲ့ ၁၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို တာချီလိတ်ဘက်မှာ အဓမ္မ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ခိုင်းစေဖို့ ပွဲစားတွေက ခေါ်ဆောင်လာတာကို တာချီလိတ် လူကုန်ကူးတားဆီးရေး အဖွဲ့က လက်ဦးမှုရယူပြီး ဖော်ထုတ်အရေးယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု တာချီလိတ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အဖွဲ့မှ ဒု-ရဲမှူးကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေးက ပြောသည်။
လိင်လုပ်သားအဖြစ် ရောင်းစားခံရသည့် အမျိုးသမီးများသည် အသက်၁၅နှစ် မှ အသက် ၃၈နှစ်အထိ အသက်အရွယ်များ ပါဝင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင် ရောင်းစားကြပြီး ပြည်တွင်း၌လည်း ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အဓမ္မခိုင်းစေရန် အမျိုးသမီးငယ်များကို ပွဲစားများက ခေါ်ဆောင်လျက် ရှိနေသည်။
လူကုန်ကူးမှု တားဆီးဖော်ထုတ်ရေးနယ်စပ် ဆက်ဆံရေးရုံးများကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် လွယ်ဂျယ်၊ မူဆယ်၊ လောက်ကိုင်၊ ချင်းရွှေဟော်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တာချီလိတ်၊ မြဝတီ၊ ဘုရားသုံးဆူ၊ ထားဝယ်၊ ကော့သောင်းမြို့ များတွင် လူကုန်ကူးမှုများကို စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ရန် ရုံးများဖွင့်ထားသည်။
(၁၃)နှစ်သမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ လူငယ်(၃)ဦးအား အမှုဖွင့်
(၁၃)နှစ်သမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ မိခင်က ပြုကျင့်ခဲ့သူနှင့် အားပေးအားမြှောက် ပြုလုပ်ခဲ့ သူများ ကိုပါ အရေးယူပေးရန် တိုင်တန်းမှုတစ်ခုကို ရွှေပြည်သာ လှော်ကားနယ်မြေရဲစခန်းက အမှုဖွင့် စစ်ဆေး လျက်ရှိသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက် ည ၉နာရီခွဲအချိန်က အသက်(၁၃)နှစ်သာ ရှိသေးသည့် ကလေးငယ် သည် ခြေရင်းအိမ်သို့ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထွက်သွားပြီး ည ၁၁ နာရီအချိန်မှသာ နေအိမ်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟု မိခင်က ဆိုခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်တွင်လည်း သမီးဖြစ်သူ အမူအယာပျက်ယွင်းနေ၍ မေးမြန်းရာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်ညက မဌေးရီဆိုသူမှ လာခေါ်သဖြင့် လိုက်သွားခဲ့ရာ ၎င်း၏နေအိမ်တွင် အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးက သားမယားအဖြစ် တစ်ကြိမ် ဆက်ဆံခဲ့သည်ကို ပြောပြခဲ့သည်ဟု မိခင်က ရဲအား ပြောဆိုခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် နံနက် ၁ နာရီခွဲအချိန်ကလည်း သမီးဖြစ်သူမှာ နေအိမ်မှ ပျောက်ဆုံးသွား သဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေရာ မျိုးသူ(၂၁)နှစ်၏ နေအိမ်အောက်တွင် သမီးဖြစ်သူအား သားမယားပြုကျင့်သူဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးနှင့်အတူ ခြင်ထောင်ထဲတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု ထွက်ဆိုထားသည်။
ထို့ပြင် ယင်းနေအိမ်ရှိ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ မျိုးသူ၊ သီးဟနိုင်နှင့် ကိုထွေးတို့ သုံးဦးက သမီးဖြစ်သူအား မကြားဝံ့ မနာသာ စကားများ ပြောဆိုနေသံကြားရသဖြင့် သမီးဖြစ်သူအား နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရသည် ဟုလည်း ရဲအား ပြောပြထားသည်။
ထို့ကြောင့်သမီးအား သားမယားပြုကျင့်သူနှင့် အားပေးကူညီသူ မျိုးသူ၊ သီဟနိုင်နှင့် ကိုထွေးတို့ သုံးဦးကို အရေးယူပေးရန် စွပ်စွဲ တိုင်တန်းထားခြင်း လည်းဖြစ်သည်။
ရည်းစားဟောင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်၍ မဖွယ်မရာ ဓာတ်ပုံရိုက် အွန်လိုင်းတင်သူကို ဖမ်းဆီး
အမျိုးသားတစ်ဦးက လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်မှ ချစ်သူ ရည်းစားဖြစ်ခဲ့သူ ချစ်သူမိန်းကလေးဟောင်းကို မိမိ၏ နေအိမ် သို့ အတင်းအဓမ္မ ဆွဲယူခေါ်ဆောင်ပြီး အလိုမတူပါဘဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး အ၀တ်အစား များကို ချွတ်၍ လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ကာ ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံများရိုက်ပြီး မိန်းကလေး၏ ညီမဖြစ်သူထံ အွန်လိုင်း မှ ပို့ပေးခဲ့ရာမှ မိခင်ဖြစ်သူမှ သိရှိသွား၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းရာမှ အဖြစ်မှန်ကို သိရှိခဲ့ပြီး ပျဉ်းမ နားမြို့ မ ရဲ စခန်းသို့ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့သောအမှုမှ တရားခံကို ဖမ်းမိထားရှိပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းကို စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် အဆိုပါ မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအချိန်က မ—- (၂၆)နှစ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ ရွှေချီရပ် ကွက်တွင် နေထိုင်သူသည် ပျဉ်းမနား ဆင်ရတနာမီးပွိုင့်အနီး ရှိနေစဉ် လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်က ချစ်သူသမီးရည်စား ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ ပြည်ဖြိုးအောင် (၂၇)နှစ်၊ (ဘ) ဦးကျော်မြင့်၊ ရန်အောင် (၁) ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နေသူ ရောက်ရှိလာပြီး မ—– ကို ဆဲဆိုကြိမ်းဝါးပြီး ၎င်း၏ နေအိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ အိပ်ယာခုတင်ပေါ် တွန်းလှဲခဲ့ကာ …မ—- ၏ အ၀တ်အစားများကို အကုန်ချွတ်၍ သားမယားအဖြစ် တစ်ကြိမ် ပြုကျင့်ကြောင်း၊ ၎င်းနောက် မ—- ကို လက်ပြန်ကြိုးတုတ်၍ ၎င်း၏ ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူပြီး ၎င်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါက ဓာတ်ပုံများကို အင်တာနက်ပေါ်သို့ တင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုရာ မ—- မှ ထိုကဲ့သို့ မပြုလုပ်ရန်၊ ရိုက်ယူထားသော မိမိပုံများအား ဖျက်ပေးပါရန် ငိုယို တောင်းပန် အသနားခံ ပြောဆိုသော်လည်း ပုံများဖျက်ပေးခြင်း၊ လက်မခံခဲ့သည့်အပြင် ပြည်ဖြိုးအောင် (၂၇)နှစ်၊ (ဘ) ဦးကျော်မြင့်၊ ရန်အောင် (၁) ရပ်ကွက် နေထိုင်သူမှ မ—-၏ ညီမဖြစ် သူ မ—– ကိုင်ဆောင်သော ဖုန်းသို့ မိမိရိုက်ထားသော ပုံများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က အွန်လိုင်းမှ ပေးပို့ခဲ့သောကြောင့် မ—– ၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်—– က သိရှိပြီး ဖြစ်စဉ်အား မေးမြန်းခဲ့ရာမှ သမီးဖြစ်သူ၏ ပြန်ပြောပြချက်အရ သိရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် မ—– မှ ၎င်းအား အလိုမတူဘဲ အတင်းအဓမ္မ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး ကာယိနြေ္ဒ ပျက်ပြားစေလျက် အရှက်ခွဲခဲ့သူ ပြည်ဖြိုးအောင်အား ဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်က တိုင်တန်းမှုကို ပျဉ်းမနားမြို့မ ရဲစခန်းမှ (ပ) ၅၈၅/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၇၆ အရ အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ဒုရဲမှူး မျိုးသန်းဝင်းမှ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
“စာနာမှုလုံးဝမရှိတဲ့ လူယဉ်ကျေးတွေ . . . အလစ်ကိုချောင်း တစ်ဖက်သားတစ်ချက်အငိုက်ကို အပြစ် အနာမဲ့ မောင့် အရိုင်းပန်း . . .သန့်စင်တဲ့ မောင့်တစ်ပွင့်ပန်း. . . အနီရောင်စွန်းထင်းကာလ အလှမပြည့်ခင် မြေမှာ ခရရှာပြီ...”
ရောင်စုံမီး လုံးများ ခပ်မှိန်မှိန်ထွန်းညှိထားသည့် အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှ စိုင်းထီးဆိုင်၏ တေးသီချင်း တစ်ပုဒ် ကို အာလေးလျှာလေးအော်ဆိုသံက အခန်းအပြင်သို့ တိုင်ပျံ့လွင့်လာသည်။
အဆိုပါအခန်းလေးထဲတွင်တော့ အရက်ဘီယာသောက်စားထားသည့် အမျိုးသားအချို့ရှိသည်။ စားပွဲပေါ် တွင် ပြန့်ကျဲနေသော ဘီယာပုလင်းများနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာအချို့ရှိသည်။ စီးကရက်ပြာများနှင့် မီး ခိုးငွေ့များ ရှိသည်။ ဂငယ်သဏ္ဍာန်ခင်းကျင်းထားသည့် ဆိုဖာဆက်တီခုံများရှိသည်။ သီချင်းဖွင့်ထားသည့် တီဗီ တစ်လုံးနှင့် ဆောင်းဘောက်စ်နှစ်လုံးရှိသည်။
မိုက်ကိုင်၍သီချင်းဆိုနေသည့် အမျိုးသားတို့အနီးတွင် ရေမွှေးနှင့် ပေါင်ဒါနံ့ထုံသင်းနေသည့် မိတ်ကပ် အဖွေး သားဖြင့် စကတ်တိုတိုကောင်မလေးအချို့ရှိသည်။ အမျိုးသားတစ်ဦးက သူ့နံဘေးမှ ကောင် မလေး ကို သူသီဆိုလိုသည့်တေးကို စက်အတွင်းထည့်ခိုင်းနေသည်။ ကောင်မလေးတစ်ဦးက ကုန်သွားသည့် ဘီယာခွက် များကို လိုက်ဖြည့်ပေးလျက်ရှိသည်။
သီချင်းဆိုရန် အလှည့်မကျသေးသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးက သူ့ဘေးမှထိုင်နေသည့် အသက် ၂၅ နှစ်ခန့်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ဦးကို ပခုံးဖက်ရင်း တို့ထိကျီစယ်လျက်။
မြို့တော်ကြီးများတွင် ပေါများလာသည့် ကေတီဗီ(ခေါ်) ကာရာအိုကေခန်းတို့နှင့်အတူ အသက် ၂၀၀န်းကျင် မှ ၂၇ နှစ်အရွယ်ထိ အမျိုးသမီးငယ်များက တေးသံများနှင့် ပျော်မွေ့သည့်အလုပ်ဆီသို့ ၀င်ရောက် လာကြပါသည်။ ယခင်က ကြိုးကြားကြိုးကြားသာ ပိုင်ရာဆိုင်ရာနားလည်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကာရာအိုကေဆိုင်များသည် ယခုအခါမှာတော့ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ဖွင့်လှစ်လာကြပြီဖြစ်သည်။
သီချင်းဆိုဝါသနာပါသူ (သို့မဟုတ်) မူးယစ်လာပါက အလိုလိုသီချင်းဆိုချင်လာသူ (သို့မဟုတ်) စိတ်ခံစားချက်များကို ပေါက်ကွဲအော်ဟစ်ပစ်လိုသူ အမျိုးသားတို့အတွက် သန်းခေါင်ကျော်အထိ ဖွင့်လှစ်ကြသည့် ကေတီဗီများက ဗိမာန်တစ်ခုဖြစ်နေသည်။ အဆိုပါကေတီဗီများတွင် သီချင်းထည့်ပေးရန်၊ ဘီယာငှဲ့ပေးရန်အလို့ငှာ အမျိုးသမီးငယ်များကို ခန့်ထားလေ့ရှိကြသည်။
အမျိုးသမီးအများစုသည် ပဲခူးတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းကဲ့သို့သော နယ်ဒေသများမှ လာရောက်လုပ် ကိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး များသော အားဖြင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၀န်ထမ်းဘ၀မှ နယ်ပယ်ကူးပြောင်း လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အစက လှိုင်သာယာအထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ လုပ်တယ်။ ဒီမှာ အရင်လုပ်နေတဲ့ သူငယ် ချင်းရဲ့အစ်မ က တစ်ဆင့် ရောက်လာတာ”ဟု အလယ်အလတ်တန်းစား ကေတီဗီတစ်ခုမှ အမျိုး သမီး တစ်ဦး ကပြော သည်။
ကေတီဗီတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အမျိုးသမီးတို့မှာ အဓိအားဖြင့်တော့ ထုံးစံအတိုင်း စားဝတ်နေ ရေးကြော င့်ပင်ဖြစ်သည်။ မူလရရှိသည့် ငွေကြေးထက် အနည်းဆုံးငါးဆ သာလွန်အောင်ရရှိသည့် အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ကေတီဗီဝန်ထမ်းမယ်တစ်ဦးလျှင် အခြေခံလစာအဖြစ် တစ်လလျှင် နှစ်သောင်းဝန်းကျင်ခန့်သာ ရရှိသော် လည်း နေစရာအဆောင်ပေးပြီး ထမင်းကျွေးသည့်အပြင် ဆက်ရှင်ကြေးပါရရှိကြသည်။ အဓိက၀င်ငွေမှာ ဧည့်သည် များ ထံမှ စေတနာသဒ္ဓါသရွေ့ ပေးကမ်းသည့်မုန်ဖိုးပင်ဖြစ်သည်။
တစ်ည လျှင် ကာရာအိုကေခန်း သုံး၊ လေးခန်း ကူးသန်း၍ အမျိုးသားဧည့်သည်တော်ကြီးများကို အဖော် လုပ်ပေးခြင်း က တစ်ခန်းလျှင် မုန့်ဖိုးငါးထောင်မှ တစ်သောင်းကျပ်အထိ ရရှိကြသည့်အတွက် တစ်လ၀င်ငွေ မှာ အထည်ချုပ်အလုပ်နှင့်ယှဉ်လျှင် မက်လောက်စရာဖြစ်သည်။ အမျိုးသားတစ်ဦးအနီးတွင် ၀င်ထိုင် လိုက်လျှင် ကေတီဗီစားပွဲထိုးတစ်ဦးက အအေးတစ်ဘူးလာချပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အအေး ဘူးကိုမသောက် သုံးဘဲ ကောင်တာကိုပြန်အပ်ပါက အအေးဖိုးငွေကိုပါ ထပ်မံရရှိသည်ဟုသိရသည်။
ရရှိသည့်ငွေကြေးများကို စုဆောင်းကာ နယ်တွင်ကျန်ရစ်သည့် မိသားစုထံသို့ပြန်ပို့ကြသည်ဟု ကေတီဗီမယ် အမျိ်ုးသမီးငယ်တို့က ပြောကြသည်။
“တစ်လကို နှစ်သိန်းလောက်တော့ ပြန်ပို့နိုင်တယ်။ ရသမျှထဲက ချွေတာပြီးသုံးတယ်”ဟု ကေတီဗီမယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် မဖွေးဖွေး (အမည်လွှဲ)ကဆိုသည်။ မဖွေးဖွေးက အလယ်အလတ်တန်းစား ကေတီဗီတစ်ခုတွင် အလုပ်ဝင်နေသည် မှာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မည်ဖြစ်သည်။ နယ်မှ နွမ်းပါးသည့်မိသားစုတွင် ညီမဖြစ်သူက အထက်တန်းတက်ရောက်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ကြားနိုင်ရန် ၎င်းတွင်တာဝန်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
မဖွေးဖွေးကဲ့သို့ပင် အတူတူအလုပ်လုပ်နေကြသည့် ကေတီဗီအများစုမှာ ပညာရေးကို ပြီးဆုံးအောင်မသင်ကြားခဲ့ကြရပေ။ သို့သော်လည်း ငွေရပေါက်လွယ်သည့်လုပ်ငန်းမို့ ကေတီဗီမယ်ဆယ်ဦးလျှင် ရှစ်ဦးက ယခုဘ၀ကို ကြိတ်မှိတ်လုပ်ကိုင်နေကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။
“တချို့ရွေးစရာလမ်းမရှိတဲ့သူ။ တချို့က တခြားအလုပ်ထက် ၀င်ငွေပိုကောင်းလို့လုပ်တဲ့သူ။ တချို့ကျတော့ စီးပွားရေးဆန်ဆန် လုပ်နေတဲ့သူတောင်ရှိတယ်။ အပြင်မှာ တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဘာနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကိုလည်း ဆက်လုပ်တာပဲ။ အဲဒီလို ကောင်မလေးတွေကျတော့ အထာကြီးတွေနဲ့”ဟု နေပြည်တော်မှ အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
“ကျွန်တော့် အစ်မ၀မ်းကွဲတစ်ယောက် မြ၀တီမှာ ကေတီဗီမှာလုပ်နေတယ်။ သူ့ကလေးကြောင့်ပါပဲ။ ယောက်ျားကပစ်သွားတယ်လေ။ အစ်မက အသက် ၂၀ ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။ ဆယ်တန်းလည်းမအောင်ဘူး။ မြန်မြန်နဲ့ များများရတဲ့အလုပ်ကိုရှာတာ။ အဲဒီကရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ကလေးကိုကျောင်းထားတယ်။ သူ့အစ်မနဲ့ အမေကို ပြန်ထောက်ပံ့တယ်။ သူအလုပ်ကနေထွက်ချင်ပြီလို့ ခဏခဏပြောတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအမျိုးသားငယ်တစ်ဦးကပြောပြသည်။
မဖွေးဖွေးတို့လို ကေတီဗီမယ်များသည် ညနေ ၆ နာရီမှ ညသန်းခေါင်ကျော် ၂ နာရီခန့်အထိ အလုပ်ဆင်းရလေ့ရှိသည်။ တစ်လလျှင် နှစ်ရက်နားခွင့်ရသည်။ ကေတီဗီသို့ လာရောက်သီဆိုကြသည့် အမျိုးသားအများစုမှာ မူးယစ်သောက်စားထားသည့်အတွက် တထောင်းထောင်းထနေသည့် အရက်နံ့နှင့်ယဉ်ပါးအောင် နေထိုင်ကြရသည်။ ၎င်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကို ပွတ်သပ်ထိတွေ့မှုအချို့အတွက် သည်းခံကြရသည်။ အမူးလွန်နေသည့်ဧည့်သည်များက ရစ်သည့်ဒဏ်ကိုလည်းခံကြရသည်။
ကေတီဗီဆိုင်များမှာလည်း အထက်တန်းစားနှင့် အလယ်အလတ်တန်းစားများ အသီးသီးရှိကြသည့်အတွက် အထက်တန်းစားဆိုင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရန် အခွင့်ကောင်းစောင့်ကြရသည်။ အထက်တန်းစားကေတီဗီများမှာ အစားအသောက်နှင့်အခကြေး ဈေးကြီးသည့်အပြင် ကေတီဗီမယ်သို့ပေးရသည့် မုန့်ဖိုးပမာဏလည်း များပြားသွားသည့်အတွက် ၀င်ငွေပိုမိုရရှိကြသည်။
“အောက်တန်းကေတီဗီတွေက မယ်တွေက ဘ၀ပေးအခြေအနေအရဖြစ်ပြီးတော့ အထက်တန်းကေတီဗီကမယ်တွေက အလွယ်ကြိုက်တွေလို့မြင်တယ်။ သွားတဲ့သူ သုံးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့အနေအထား။ အခန်းအပြင်အဆင်တွေကအစ ကွာတယ်”ဟု အလွတ်တန်းဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးက ၎င်း၏အမြင်ကိုပြောပြသည်။
အထက်တန်းစားကေတီဗီများသို့ လာရောက်ကြသည့် ဧည့်သည်များမှာလည်း ငွေကြေးတတ်နိုင်သည့် လူတန်းစားတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ငွေကိုရေလိုသုံးဖြုန်းခဲ့ကြလေ့ရှိသည်။ ဧည့်သည်အမျိုးသားက ၎င်းနံဘေးတွင် အဖော်လာပြုပေးသည့် ကေတီဗီမယ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားခြင်းမှအစပြုကာ အားလပ်ရက်တွင် လျှောက်လည်ခြင်းမျိုးလည်း ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးမှ ရရှိသည့်ဝင်ငွေက တစ်လ၀င်ငွေထက် ပိုများသွားလေ့ရှိသည်ဟု ကေတီဗီသွားရောက်လေ့ရှိသူများကဆိုကြသည်။
ရွှေဂုံတိုင်မှ Family (ပွင့်သစ်စမ်း)နှင့် ရွှေတိဂုံတောင်ဘက်မုခ်မှ M3 ၊ Music Box ကဲ့သို့သော ကေတီဗီများကတော့ မိန်းကလေးဝန်ဆောင်မှုမပေးဘဲ အရက်ဘီယာသောက်စားရင် သူငယ်ချင်းများနှင့်သီဆိုခြင်း၊ မိသားစုအလိုက် လာရောက်သီဆိုခြင်း စသည့်တို့အတွက် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်သော မြ၀တီနှင့် မဲဆောက်မြို့များတွင်လည်း ကေတီဗီများစွာရှိပြီး မြန်မာအမျိုးသမီးများ လာရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ကွာတာက ဘတ်ငွေနဲ့ ကျပ်နဲ့ပေးရတာချင်းကွာပြီး တူညီတာကတော့ ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတာ မြန်မာအမျိုးသမီးချည်းဖြစ်နေတာပဲ။ တချို့ဆို သမီးဆီမှာ ငွေလာတောင်းတဲ့အချိန် သမီးရယ် ဆက်လုပ်ပါဦးလို့ သမီးကို တောင်းပန်နေတာမျိုးလည်း ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်”ဟု မဲဆောက်မြို့တွင် နေထိုင်သည့် ကိုဆမ်ကပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ကေတီဗီကာရာအိုကေဆိုင် အများဆုံးရှိသည့် နေရာများမှာ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ မရမ်းကုန်း၊ အလုံ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကေတီဗီများတွင် ညစဉ်နှင့်အမျှ
သီဆိုသူအမျိုးသားထုဖြင့် ပြည့်နှက်လျက်ရှိပြီး ကေတီဗီမယ်တို့မှာလည်း ညစဉ်နှင့်အမျှ မအားလပ်အောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေကြဆဲဖြစ်သည်။
အစိုးရမင်းတို့ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်တွင်လည်း တော်ဝင်နန်းဟူသည့် အကြီးဆုံးကေတီဗီမှသည် ဘောဂသီရိကားဝင်းမှ ကေတီဗီများအထိရှိကြပြီး ငွေဖြုန်းတီးကြမည့် အမျိုးသားဧည့်သည်တော်ကြီးများကို စောင့်မျှော်လျက်ရှိကြသည်။
“အစားအသောက်ဈေးကြီးတယ်။ ကောင်မလေးတွေက ၀တ်ကျေတမ်းကျေတွေများတယ်။ တခြားအခန်းနဲ့ ဆက်ရှင်ခွဝင်တာများတယ်။ သီချင်းအပ်ဒိတ်လုပ်တာနည်းတယ်။ ဆက်ရှင်ပြီးခါနီးရင် ကောင်မလေးတွေက အချိုးပြောင်းတယ်။ ငွေကုန်တယ်။ အသံပြာတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တယ်”ဟု နေပြည်တော်အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ကေတီဗီကို မကြိုက်နှစ်သက်ရသည့် အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြသည်။
ကေတီဗီမယ်များသည် တကယ့်ဘ၀အခက်အခဲကြောင့် ပိုက်ဆံအလွယ်ရသည့် လမ်းကြောင်းကို ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ကြပြီး ရည်မှန်းထားသည့် ငွေကြေးစုဆောင်းမိလျှင် မိဘနေရပ်ပြန်၍ ကောင်းရောင်း၊ ကောင်းဝယ်လုပ်စားကြခြင်းမျိုးလည်း ရှိကြပါသည်။
“တချို့က နောက်ကြောင်းမပြန်တော့ဘူး။ ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့သားကောင်လို့ကိုထင်လာပြီး အဲဒီအလုပ်မှာပဲ ပျော်နေတော့တာ။ အသက်သုံးဆယ်ကျော်လောက်ဆို အူတူတူရိုးသားတဲ့ငွေကြေးအသင့်အတင့်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို အပိုင်ချည်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဘ၀လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းပစ်လိုက်ကြတာလည်းရှိတယ်။ ၀မ်းရေးကြောင့် ၀င်လုပ်ရတဲ့သူတွေထဲက တစ်ရာမှာဆယ်ယောက်လောက်ကတော့ မူလရည်မှန်းချက်အတိုင်း ဒီဘ၀ကလွတ်မြောက်အောင် ရုန်းထွက်နိုင်တာတွေ့ရတယ်”ဟု ကေတီဗီများသို့ ပုံမှန်သွားရောက်လေ့ရှိပြီး ကေတီဗီမယ်တစ်ဦးနှင့် သမီးရည်းစားသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကရှင်းပြသည်။
မိမိပညာအရည်အချင်းနှင့် တစ်လလျှင် လစာသိန်းချီရနိုင်သည့် အလုပ်မျိုးမရှိသည့်အတွက် အလုပ်ထွက်လိုသော်လည်း ဒီလောကထဲမှာပင် တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေရသည်ဟု မဖွေးဖွေးက
ပြောပါသည်။ ခုနစ်တန်းအောင်ခဲ့သည့် မဖွေးဖွေးမှာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ အဲဒါက ဒီဘ၀ထဲကရုန်းထွက်ပြီး သူနာပြုအကူအဖြစ် အသက်မွေးလိုခြင်းပဲဖြစ်သည်။
ရောင်စုံမီးလုံးများ ထွန်းညှိထားသည့် အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ သီချင်းသံနှင့်အတူ ဆေးလိပ်ငွေ့များ၊ အရက်နံ့များလှိုင်ထနေသည်။ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မဖွေးဖွေးတစ်ယောက် ဘီယာပုလင်းကိုကိုင်ကာ ဧည့်သည်ရှေ့မှကုန်သွားသည့် ဘီယာခွက်ထဲသို့ ငှဲ့ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ယခုတော့ ၎င်းမျက်နှာတွင် အပြုံးတစ်ပွင့်ကို တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
၀င်ငွေကွာဟမှုအခြေအနေများကြောင့် ကြိုးစားရုန်းကန်ရမှုဘ၀တစ်ခု၏ သက်ပြင်းတစ်ချက်သည် မွန်းကျပ်သည့် အခန်းငယ်လေးထဲမှာ သီချင်းသံနှင့်အတူ အပြင်ဘက်သို့လွင့်ပါသွားလေသည်။ ။
တပ်မတော်မှ အရာရှိ တစ်ဦး ကချင် တွင် အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကေ အိုင်အိုဘက်မှ စုံစမ်းပြီး ဟုတ် မဟုတ် မကြာမီ အကြောင်းပြန်မည်ဟု မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ လလယ်က ကေအိုင်အို နည်းပညာအထောက်အကူ ပြုအဖွဲ့နှင့် MPC နည်းပညာအထောက် အကူပြုအဖွဲ့တို့အကြား တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နောက် ယခုကဲ့သို့စုံစမ်းပြီး အကြောင်း ပြန်မည်ဟု တပ်မတော်သို့ အကြောင်း ကြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်တွင် မြန်မာရပ်ကွက် လုပ်ပေးမည်
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရုတ်ရပ်ကွက် China town၊ ကိုရီးယားရပ်ကွက် Korea Town ရှိသလို မြန်မာ အများ စုနေထိုင် တဲ့ မဟာချိုင်မှာ မြန်မာရပ်ကွက် Myanmar Town လုပ်ပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ထိုင်း-မြန်မာ လွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ Alongkorn Ponlaboot က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ က တွေ့ဆုံချိန် သူက ခုလို ပြောလိုက် တာလို့ ဒီကေန့ထုတ် ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ် သတင်း စာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အဲဒီ မြန်မာရပ်ကွက် စီမံကိန်းမှာ မြန်မာ အစားအစာ အရောင်းပြခန်း၊ ရိုးရာလက်မှုပစ္စည်း အေရာင်းပြခန်း၊ မြန်မာကားပြမယ့် ရုပ်ရှင်ရုံ၊ မြန်မာပြည်ကို ငွေလွှဲနိုင်မယ့် ဘဏ် စတာတွေကို စုံစုံလင်လင် ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား သန်းနဲ့ချီ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး ရေလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ မဟာချိုင် အရပ်မှာတော့ အေရအတွက် အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂြိုဟ်သားသတင်း အချိန်မီသိရှိနိုင်ရန် ပန်းကန်ပြားပျံ စောင့်ကြည့်ရေးသမား တစ်ဦးကို ရီဟားနား ငှားရမ်း
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ်အဆိုတော် ရီဟားနားဟာ ဂြိုဟ်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ပန်းကန်ပြားပျံ စောင့်ကြည့်ရေးသမားတစ်ဦးကို ငွေပေးပြီး ငှားရမ်းခဲ့တယ်လို့ Dailystar သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရီဟားနားဟာ ဂြိုဟ်သားတွေ အမှန်တကယ် ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဂြိုဟ်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို အချိန်မီ မသိရမှာစိုးတဲ့အတွက် ကယ်လီ ဖိုးနီး ယားပြည်နယ် မိုဟာဗီ သဲကန္တာရထဲမှာ စခန်းချပြီး ပန်းကန်ပြားပျံတွေ ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာ နေသူ တစ်ဦး ကို အခုလိုငှားရမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ရီဟားနားက သူမရဲ့သက်တမ်းအတွင်းမှာပဲ ဂြိုဟ်သားတွေ ကမ္ဘာပေါ်ကို ဆင်းလာလိမ့်မယ်လို့ အမြဲတမ်း ယုံကြည်နေ ခဲ့တာပါ” ဟု ရီဟားနာနဲ့ ရင်းနှီးသူတစ်ဦးက Dailystar သတင်းစာကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရီဟားနားဟာ အဆိုပါ ပန်းကန်ပြားပျံ စောင့်ကြည့်ရေးသမားနဲ့ Little A'Le'Inn လို့ အမည်ရတဲ့ စားသောက် ဆိုင်တစ်မှာ တွေ့ဆုံပြီး ဂြိုဟ်သားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို ရယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Little A'Le'Inn စားသောက်ဆိုင်ဟာ ပန်းကန်ပြားပျံ ရှာဖွေသူတွေ လာရောက် တွေ့ဆုံလေ့ရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မကြာခဏ ပါလေ့ရှိတဲ့ Area 51 နဲ့လည်း နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေတာကြောင့် ရီဟားနားက အဲဒီဆိုင်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့လည်း Dailystar သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားချက်အရ သိရပါတယ်။
ဂြိုဟ်သားတွေ ကျူးကျော်လာရင် သိနိုင်အောင်လို့ ကလေးဘဝတုန်းကိုဆိုရင် ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ပြီး အချိန်ဖြုန်းလေ့ ရှိတယ်လို့လည်း ရီဟားနားက ပြောဖူးပါတယ်။
“ကျွန်မအဖေက ကျွန်မကို ပန်းကန်ပြားပျံတွေ ဖြတ်ပျံသွားရင် မြင်လိုက် ရအောင်လို့ အိမ်အပြင်မှာ တစ်ညလုံးထိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်ခိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ အဲဒီအလုပ်ကို နှစ်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ရီဟားနားက ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်ကို ဗန်းပြပြီး လက်နက်မစွန့်နိင်ကြတော့တဲ့ သူတို့တွေ
တောင်ကြီးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှူတည်ဆောက်ပွဲ မှာ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်)ပိုင်းက ဦး ပေါင်ခေး ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ ဖွဲ့စည်းနေရာချထားခြင်းအတွက် ပြောကြား တဲ့ စကားကို ကြားမိတော့ ယဲ့ပြုံးလေးတစ်ချက်တော့ပြုံးမိပါတယ်။သူပြောတာလေးကတော့ စကားကွက် ကတကယ် လှပါတယ်။
သူ့အပြောအရ စစ်တပ်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် လို့သုံးနှုန်းသွားတာ တစ်ခုတွေ့မိတယ်။အဲဒီမှာ မေးစရာရှ်ိလာပါတယ်။လက်ရှိစစ်တပ်ကရော သူတို့အခေါ် ဗမာလူမျိုးကြီး ဆိုတဲ့ဝါဒဆိုပြီး ဗမာတွေချည်း ရှိနေတာမို့လား။လက်ရှိ စစ်တပ်ထဲမှာရော တိုင်းရင်းသားတွေ ရှိနေတာပဲ မဟုတ်လား။ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း သီးသန့်နေပြီး ကိုယ့်နယ်မြေမှာ ကိုယ်မင်းလုပ်ချင်တာ ဘယ်သူတွေလဲ လို့ပြန်မေး လိုက်ရင် ဗိုလ်မှူးချုပ် ပေါင်ခေးဘယ်လိုဖြေမလဲ သိချင်ပါတယ်။ စစ်တပ်မပြောပါနဲ့ဦး။ ကျွန်တော် ၁၉၉၇ ခုနှစ် အလုပ်ဝင်ခါစ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)ကိုရောက်တော့ ‘အော်.ဗမာပြည်ကလာတာလား’ ဆိုပြီး မေးခံရလွန်းလို့ ခဏခဏ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ဘယ်သူတွေက ခွဲခြားနေတာလဲ။ ထားပါတော့.နောက်တစ်ချက်က ဗိုလ်မှူးချုပ်ပေါင်ခေး ပြောသလို ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်တကယ်ကြီး ဖြစ်လာတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။အဲဒါကို သမ္မတအောက်မှာ ထားရှိရေးလို့ပြောတယ်နော်။ အခုလက်ရှိစစ်တပ်ကရော သမ္မတ အောက်မှာ မဟုတ်လို့လား။သမ္မတအမိန့်ကို မနာခံပဲနေလို့လား။ကေအိုင်အေ နဲ့ တိုက်စဉ် တုန်း ကလည်း လိုင်ဇာကိုသိမ်းဖို့ လက်တကမ်းအလိုကျမှ သမ္မတကြီးရဲ့ ထိုးစစ်တစ်ဖက်သတ်ရပ် ထားတာကြောင့် စစ်တပ်က စစ်သားတွေ အများကြီး ကေအိုင်အေလက်ချက်နဲ့ အသတ်ခံရလို့ စစ်သားတွေရဲ့ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ လေသံတွေ အွန်လိုင်းမှာ ပွထနေခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုကို ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ပြည်နယ်တွေအတွက် လုံခြုံရေးတပ်တွေကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးအောက်မှာ ထားရမယ်ဆိုတော့ကာ အဲဒီတပ်တွေဟာ ပြည်နယ် ၀န်ကြီးတွေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ်တွေ ဖြစ်မသွားဘူးလား။ပြီးတော့ အဲဒီတပ်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်နဲ့ ဘယ်လို အနေအထားရှိမလဲ။ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ရဲ့ အမိန့်ကို ပြည်နယ်စောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က နာခံမှာ လား။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရဲ့ အရိပ်အကဲနဲ့ လှုပ်ရှားမှာလား။အစိုးရပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကရော ပြည်နယ် လုံခြုံရေးတပ်တွေကို လက်အောက်တပ်လို့ သဘောထားရမှာလား၊ မဟာမိတ်လို့ သဘောထားရမှာလား၊ ဒါဘယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရဲ့တပ်တွေကွ အချိန်မရွှေး ပုန်ကန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သံသယကြီးတွေနဲ့ အချင်းချင်း ရန်စောင် စောင့်ကြည့်နေရမှာလား။နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေကို ပြည်နယ် လုံခြုံရေးတပ်အောက် ထားမယ် ဆိုတော့ နယ်ခြားစောင့်တပ် တွေက ဘယ်သူ့ရဲ့ လက်အောက်ခံ တပ် ဖြစ်သွားမလဲ။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတပ်ရဲ့ အရံအင်အားစု ဖြစ်သွားမယ့်သဘောလား။နောက်ပြီး အခုလက်ရှိ နယ်ခြားစောင့်တွေတောင် နိုင်ငံတော်စစ်တပ်ထဲမှာ လက်ရုံးတပ်တစ်ခု အနေနဲ့တည်ရှိနေတာ။ သူတို့ကို ပြည်နယ်လုံခြုံရေးတပ် အောက်မှာ ထားမယ်ဆိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့လောက်တောင် အဆင့်မရှိတဲ့တပ်တွေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ လက်ရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေကရော သဘောတူလက်ခံမယ်လို့ ထင်ပါသလား။ လက်မခံခဲ့ရင် အကျိုးဆက်က စားပွဲဝိုင်းတွေပေါ်မှာ အဆုံးမသတ်ပဲ ရိုင်ဖယ်ပြောင်းက မီးပွင့်တွေက စကား ပြောကြတော့မယ်။ ။လက်ရှိ ကိုယ့်တပ်တွေကို အသွင်ပြောင်းပြီး ပြည်နယ်လုံခြုံရေးလုပ် ၊ကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်၊ အခြေအနေမဟန်ရင် တပ်တွင်းပုန်ကန်မှူတွေ စလုပ်ပြီး ပြည်နယ် ခွဲထွက်သွားမယ် လို့များကြံစည် နေပါသလား။ နောက်ပြီး မြန်မာနိင်ငံမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်း ၁၀ဖွဲ့/၁၅ဖွဲ့ လောက်ရှိတယ်။အဲဒီအဖွဲ့တွေကရော အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးရင် လက်နက်တကယ် စွန့်ကြမှာလား။ လက်နက်စွန့်ပြီး လက်ရှိစစ်တပ်အောက်မှာ တပ်ဖွဲ့ တစ်ခုအနေနဲ့ လက်ရှိမြန်မာ စစ်တပ်ရဲ့ စစ်သားအနေနဲ့ အမူထမ်းကြမှာလား။သေချာတယ် ဘယ်သူမှ မစွန့်ကြဘူး။
အခု အဖွဲ့အစည်းတွေလိုချင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာက စာရွှက်တွေပေါ်မှာ ဘယ်လိုပဲစကားလုံးလှည့်လှည့် အနှစ်ချုပ်က ကိုယ့်ပြည်နယ်ကို ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ် နဲ့ကိုယ့်စည်းမျဉ်းနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်။ပြည်မကြီးက ၀င်ရောက် စွက်ဖက်စရာမလိုဘူး။နိုင်ငံတော်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲ နိုင်ငံတော်က ကိုင်တွယ်။ဒါတောင် တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ညှိနှိုင်းကိုင်တွယ်ရမှာ။ ကိုယ့်ပြည်နယ်က ရတဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို ကိုယ့်ပြည်နယ်ပဲ သုံးမယ် ဆိုတဲ့သဘောကြီးပါပဲ ။ အစတုန်းကတော့ အစိုးရစနစ်ကိုမကြိုက်လို့ ပြည်နယ်တွေဟာ အစိုးရ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်မှူကနေ လွတ်မြောက်ပြီးနိုင်ငံငယ်အနေနဲ့ရပ်တည်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်တွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခု အားလုံးက လက်နက်ကိုင်ပြီး တစ်စင်ထောင်နေရတဲ့ အနေအထားကို မက်မောတွယ်တာနေပြီ။ ဒီလက်နက်ကိုင်ရင်းရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို မစွန့်နိုင် တော့ဘူး။ ဒါပါပဲ။ လက်နက်ကြောင့် နယ်မြေမှာ ဗိုလ်ကျနိုင်တာ။လက်နက်ကြောင့် အခုလက်ရှိ အကျိုးအမြတ်တွေ ရနေတာ။လက်နက်ကြောင့်အစိုးရနဲ့စကားပြောနိုင်တာ တွေကို အားလုံးက သာယာနေပြီ ။မဟုတ်ဘူး မငြင်းပါနဲ့ ။ ဘယ်သူမှ တောခိုတယ်ဆိုပြီး တောထဲမှာ တဲထိုးနေတာ မရှိပါဘူး။ဇာတ်လမ်းထဲက ပစ္စတိုတစ်လက်နဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်တောင် ဆင်စခန်းနဲ့ဆင်တဲ နဲ့နေသေးတာပဲ။ ခေတ်မှီစက်သေနတ်တွေ ကိုင်ထားပြီး မီဒီယာအုပ်စိုးမှူနဲ့ ခွင်ချဲ့နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ တောခိုတယ်ဆိုတာ ဘန်ကောက်မှာ ထိုင်းဘတ်သန်းချီတန်တဲ့ အိမ်တွေနဲ့ပါဗျာ။အားလုံးက လက်နက် ကြောင့်ရထားတဲ့ စည်းစိမ်တွေကို သာယာလွန်းသွားပြီ။ပြီးတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါတို့လက်နက် မကိုင်ထားရင် ငါတို့ကို အစိုးရကတွယ်တော့မှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးကြီးရှိနေလို့ပဲ။အဲဒီစိတ်ကြီးရှိနေတဲ့ ဦးပေါင်ခေး တို့လိုလူတွေကပဲ ယုံကြည်မှူ တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုတာတော့ သိပ်ဟန်ပုံမရဘူး။ တကယ် ယုံကြည်မှူ တည်ဆောက်ရာမှာ အစိုးရကိုမဟုတ်ဘူးဗျ။ အခု လက်နက်ကိုင်ထားသူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပြန်တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်တယ် ခင်ဗျ ။
အရက်ကြောင်ကြောင်နေသည့် ဖခင်က တစ်မိသားစုလုံးကို ဓားဖြင့်ထိုးသတ် နှစ်နှစ်အရွယ် သမီးငယ် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး
ကသာ ၊ စက်တင်ဘာ ၂၄
စစ် ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာမြို့ နယ် ကလုံအုပ်စု အတွင်းရှိ အင်းရွာလေးကျေးရွာတွင် စက်တင် ဘာ ၂၄ရက်က လူသတ်မှုတစ်မှု ဖြစ်သွားခဲ့ရာ ထိုဖြစ်စဉ်အပေါ် ကြားရသူတိုင်းမှ ရင်ထုမနာဖြစ် နေကြရ ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ စက်တင်ဘာ ၂၃ရက် ည ရနာရီတွင် အသက် ၃၄နှစ်ရှိ မြင့်သန်းသည် အရက်မူး ၍ ဇနီးဖြစ်သူ မအေးကြည် ၁၉ နှစ်အား လူမှုရေးဖောက်ပြန်သည် ဟုစွပ်စွဲကာ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုရန်ဖြစ်မှု ကိုအခြေခံ၍ ဇနီးဖြစ် သူ မအေးကြည်အားအရိုးအသွား ၁၈လက်မရှိဓားဖြင့် ထိုးသွင်းခဲ့ရာ မအေးကြည်၏ ဘယ်ဘက်လက် ချောင်းများပြတ်ရှကုန်ပြီး ဝဲဘက် နံရိုးအောက်သို့လည်း ဓားစိုက် ဝင်သွား ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သမီးဖြစ် သူ မနှင်း ပွင့်ဖြူ အသက် ငါးနှစ် နှင့် မလှိုင် လှိုင်ထွန်း အသက်နှစ်နှစ် တို့အား ကြိုးဖြင့် တုပ်နှောင်ထားခဲ့သည်။
ကလေးများ ငိုသံကြား၍ ဒေါ်အေးကြည်မှ ထကြည့်စဉ် မြင့်သန်းက မအေးကြည်အား အရိုးအသွား၁၈လက်မရှိ ဓားဖြင့် ထိုးသွင်းခဲ့ရာ မအေးကြည်၏ဘယ် ဘက်လက်ချောင်းများ ပြတ်ရှကာ ဝဲဘက်နံရိုးအောက်သို့လည်း ဓား စိုက်ဝင်သွား ခဲ့ပြီး နှစ်နှစ် သမီးအရွယ်ရှိ မလှိုင်လှိုင်ထွန်းအား ဓား ဖြင့်ထပ်မံမွှန်းခဲ့ရာ ဘယ်ဘက် လက်ကောက်ဝတ်၌ ပြတ်လုနီးနီး ဓားဒဏ်ရာနှင့်အတူ ထိရှဒဏ်ရာ အများအပြားရရှိခဲ့ပြီးနောက် ထိုသမီးငယ်၏ ဝဲဘက်ဝမ်းဗိုက် ကိုလည်း ဓားဖြင့် ထိုး သွင်း သတ် ဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ သမီးငယ်အား ထိုး သတ်ပြီး သမီးကြီးဖြစ်သူ မနှင်း ပွင့်ဖြူ ငါးနှစ်အား ထပ်မံ၍ ဓား ဖြင့်ထိုးခဲ့ရာ မနှင်းပွင့်ဖြူ၏ဝမ်း ဗိုက်ပေါက်ပြဲခဲ့သည်။ မြင့်သန်း သည် ကလေးများကို ဓားဖြင့်ထိုး ပြီး မိမိကိုယ်ကိုလည်း ဓားဖြင့်ထိုး ခဲ့သည်။ ထိုအခြေ အနေတွင် ဇနီး ဖြစ်သူ မအေးကြည်က ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီး ကျေး ရွာကို အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်။ ကျေးရွာလူထုမှ မြင့်သန်းနှင့် ကလေးများဖမ်းထားရာနေအိမ် သို့ဝိုင်းသောအခါ မြင့်သန်းမှ လာ ရောက်ကယ် တင်သူ အား သတ် မည်ဟုဆိုကာ အရှည်လေးတောင် ရှိမှိန်းနှင့် အရှည်၁၈လက်မရှိဓား ကို ကိုင်ဆောင်၍ ကြိမ်းမောင်းနေ မှုကြောင့် မည်သူမှ အနားသို့ မကပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ရပ်ကွက်တာဝန် ရှိသူများမှ အင်းရွာရဲ စခန်းသို့ သွား တိုင်ခဲ့ရာ စက်တင်ဘာ ၂၄ရက် နံနက်ရနာရီတွင် လူသတ်တရားခံ မြင့်သန်းအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ထိုဓားထိုးမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် နှစ်နှစ်သမီးအရွယ်ရှိ မလှိုင်လှိုင် ထွန်းမှာ နေရာ၌ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး သွားခဲ့ပြီး မအေးကြည်နှင့် မနှင်း ပွင့်ဖြူတို့မှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်း သဖြင့် ကသာခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီးတွင် အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသ မှုခံ ယူနေ ရဆဲဖြစ်သည်။ ခွဲစိတ်မှု အခြေအနေမှာ သတင်းရေးသား ချိန်အထိ စိုးရိမ်ရဆဲအခြေအနေ တွင် ရှိနေသည်။
လူသတ်တရားခံမြင့်သန်း မှာ အရက်ကို နေ့စဉ်စွဲမြဲစွာသောက် သုံးသူဖြစ်သဖြင့် အရက်ကြောင် ကြောင်ကာ ကိုယ့်မိသားစုတစ်စု လုံးကို ယခုလို ရက်စက်စွာသတ် ဖြတ်ခဲ့မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု သက် ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကောက်ချက် ချထားသည်။ ထိုလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အင်းရွာလေးကျေး ရွာနေ မြင့်သန်းအား အင်းရွာရဲ စခန်းမှ (ပ)၁၁၁/၂၀၁၃ဖြင့် တိုင် ချက်ရေးသွင်းပြီး ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ၃၀၂/၃၂၆ဖြင့် အရေး ယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
လူသတ်တရားခံမြင့်သန်း က ပြောပြရာတွင် သူသည် ၁၇ နှစ် သားအရွယ်မှ စတင်၍ အရက် သောက်ခဲ့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော ခုနစ်နှစ်က ဘုရားတွင် အရက်လှူ ခဲ့ပြီး ပြန်သောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သောလေးရက်က အရက် ဖြတ်တာကို ဆေးဝါး အကူအညီ မယူဘဲ အစိမ်းဖြတ်ထားကြောင်း ပြောသည်။ လူသတ်တရားခံ မြင့် သန်း၏ဖခင် တစ်ရွာတည်းနေ ဦးသောင်းစိန်က သူ့သားမြင့်သန်း အရက်ဖြတ်ထားသည်မှာ နှစ်ရက် ခန့်ပင် ရှိသေးကြောင်း၊ လွန်ခဲ့ သောခြောက်လ ကျော်က မြင့်သန်း နှင့်ညီဖြစ်သူတို့ စကားများရာမှ ညီဖြစ်သူက ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့၍ မြင့် သန်း၏ဝမ်းဗိုက်ကို ခွဲစိတ်ကုသ မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရသေးကြောင်း ပြော ပြခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ဇာတ်ပါဠိတော်တွင် လာရှိသော မိန်းမပျက်အင်္ဂါ(၂၅)ချက်
၂၅။ အရပ်တကာ လျှောက်သွားတတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါပေတယ်။ (မဟာကုဏာလဇာတ်၊ ဇာတကပါဠိတော်၊ ဒုတိယအုပ်၊ စာမျက်နှာ(၁၂၁)
မိန်းမသားများကလည်း မိန်းမပျက်ဘ၀မှ လွတ်ကင်းကြကာ ယောက်ျားသားများလည်း မိန်းမပျက်များနဲ့ ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်....။
☂♥ ဘာကိုမှ ရည်ရွယ်ခြင်း မရှိပါ။ ♥☂
ဝင်ကြည့်မိသော web-site ထဲမှ post ကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
♥☂♥ မျှဝေပေးတာလဲမေတ္တာတစ်ခုပါ♥☂♥
ရှော့ပင်းဈေးဆိုင်တိုက် အပြင်မှာ အသင့်နေရာ ယူထားကြတဲ့ ကင်ညာစစ်သားများ (Credit: AFP)
အာဖရှိကတိုက်ရှိ ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် Nairobi မြို့က ရှော့ပင်းဈေးဆိုင်မှာ Al Shabab အကြမ်း ဖက်တွေရဲ့ အနုကြမ်း စီးမှုဟာ ၄ ရက်မြောက်နေ့မှာ ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကင်ညာနိုင်ငံသမ္မတ Uhuru Kenyatta က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
၄ ရက်ကြာ အနုကြမ်းစီးမှုအတွင်း လူပေါင်း ၆၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ရှော့ပင်းစင်တာထဲမှာ နံရံတွေ ပြိုကျ ခဲ့တဲ့ အတွက် ပျောက်ဆုံးနေသူ အမြောက်အများ ရှိသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှော့ပင်းစင်တာမှာ စစ်သား ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ဆေးရုံအရောက်မှာတော့ သုံးဦး ကျဆုံးသွားပါတယ်။
နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်း အကြမ်းဖက်သမား ၅ ဦး ပစ်သတ် ခံခဲ့ရပြီး ၁၁ ဦး ဖမ်းဆီးထားပြီလို့ သိရပါတယ်။
လူပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်။
အခုလို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ဖို့ Al Shabab စစ်သွေးကြွတွေက ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကတည်းက ရှော့ပင်း စင်တာ အနီးမှာ ရှိတဲ့ နေအိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ဌားနေပြီး စတင်ကြံစည်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ နိုင်ငံအတော်များများက ဖြစ်ကြပြီး ဆိုမားလီးယားနိုင်ငံမှာ ကင်ညာစစ်တပ်တွေ တပ်ချထား မှုကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုမှု ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Al Shabab စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ ကွန်ယက်ဟာ နိုင်ငံတကာ အဆင့် ပါဝင်ဆက်နွယ်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။
သေဆုံးသူတွေထဲမှာ ဆယ်ကျော်သက် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၃ ဦး၊ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသား ၂ ဦးအပါအဝင် သြ စတြေး လျနိုင်ငံသား တစ်ဦးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မီဒီယာစာမျက်နှာများကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်ဖြင့် ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်မည့် WD TV Player
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Western Digital ဟု အမည်ရသော အီလက်ထရွန်နစ်လုပ်ငန်းမှ ယခင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီးဖြစ်သည့် ၎င်းစက်မော် ဒယ်များ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုထပ်မံထုတ်လုပ်သည့် စက်မှာ ယခင်မော်ဒယ် အဟောင်း များနှင့် မတူဘဲ ပိုမိုဆန်းသစ် ကောင်းမွန်သော နည်းပညာအသစ်များဖြင့် ဈေးကွက်ကို ထပ်မံ ကိုင်လှုပ် ဦးမည်ဟု သိရှိရသည်။ အားလပ်ရက်များတွင် နေအိမ်ရှိ ရုပ်မြင်သံကြားစက်ဖြင့်ပင် အင်တာနက် စာမျက်နှာများပေါ်ရှိ ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်သံများကို အလွယ်တကူ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်း အားဖြင့် သက်သာလွန်းလှပြီး အသုံးဝင်မှုများမှာ ယခင်ထုတ်လုပ်ထားသော စက်များနှင့်မတူဘဲ ထူးခြားကောင်း မွန်မည် ဖြစ်သောကြောင့် သူ၏ ပရိတ်သတ်များသည် ဈေးကွက်အတွင်း ရောက်ရှိမည့် အချိန် ကို စောင့်မျှော်လျက် ရှိနေကြောင်း ပြည်နယ် ပြန်ကြားရေး မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် သိရသည်။
ယခင်ကဲ့သို့ ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်သံများကို အခြားအပို တပ်ဆင်ကြည့်ရှုရသော စက်များဖြစ်သည့် DVD, EVD အစရှိသည့် စက်များနေရာတွင် အစားထိုး တပ်ဆင်ကာ CD, DVD ထည့်သွင်းကြည့်ရှုရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ SD Card, Memory Card အစရှိသည့် ခေတ်မီ မှတ်ဥာဏ်ကတ်များဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကြိုးမဲ့စနစ် ချိတ်ဆက်မှု ပါဝင်ပြီး ရုပ်သံကြည်လင် ပြတ်သားမှုမှာ (HD-High Definition) အဆင့် အရည် အသွေး ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အဆင့်မြင့် ဖုန်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ကာ ထိန်းချုပ်စေခိုင်းသည့် ခလုတ် Remote သဖွယ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီး ထုတ်လုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ အင်တာနက်လိုင်းပေါ်ရှိ ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်သံများကို သာမကဘဲ သတင်း စာမျက်နှာများနှင့် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများကိုပါ အဆိုပါ စက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ကာ အလွယ်တကူ ဖမ်းယူ ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၄၅ ဒေါ်လာနှင့် ၆၅ ဒေါ်လာ အတွင်းသာ ရှိသောကြောင့် များစွာကုန်ကျမှုမရှိဘဲ အားလပ်ချိန် အပန်းဖြေနိုင် မှုမှာ ပေးရသည့် တန်ဖိုးထက်ပင် ပိုမိုပြန်ရရှိနိုင်ကြောင်း ပရိသတ်အချို့၏ စာမျက်နှာအတွင်း ရေးသားမှုများကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ မည်သည့် လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးမှ မရှိဘဲ အင်တာနက်လိုင်း ရှိရုံမျှဖြင့် ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်သံများကို ကြိုးမဲ့စနစ် ပါဝင်သော ၎င်းစက်အား ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြု၍ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
တပ်ဆင်ထားရှိမှု နေရာများစွာ မလိုအပ်ဘဲ သေးငယ်ပေါ့ပါးပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်း သပ်ရပ်ကာ တန်ဖိုး အနည်းငယ် မျှဖြင့် အားလပ်ချိန်များ ကုန်ဆုံးနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်ဟု ယခင်မော်ဒယ်အဟောင်းစက်များ အသုံးပြုဖူးသူ ပရိသတ် များ၏ ပြောဆိုမှုများကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြင့် အင်တာနက် သုံးနေ ရသည်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ရုပ်မြင်သံကြားစက်ဖြင့် အသုံးပြု၍ ရနိုင်ရန်လည်း ထည့်သွင်း ဖန်တီးထားသည်ဟု သိရ သည်။ ယနေ့ ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အဆင့်မြင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက် Smart TV များနှင့်မခြား ၎င်း ဖမ်းယူကြည့် ရှုစက် တပ်ဆင်နိုင်သော ရုပ်မြင်သံကြား စက်များသည်လည်း အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်မှု လွယ်ကူစေရန် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် ပါဝင်သော ဆက်သွယ်မှု ကြိုးပေါက် များနှင့် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက် နိုင်စေရန်လည်း ထည့်သွင်း ဖန်တီးထားသည်ဟု သိရသည်။ အဆင့်မြင့်ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်သံလိုင်းများကို အင်တာနက်လိုင်း ရရှိသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ရှာဖွေ ဖမ်းယူနေ ရန် မလိုအပ်ဘဲ တပ်ဆင်ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ်ရုံဖြင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်များတွင် ဖမ်းယူကြည့် ရှုနိုင်သည် ဟု အဆိုပါ လုပ်ငန်းစာမျက်နှာတွင် တွေ့ရှိရသည်။
လောင်းကစားဒိုင်ဖမ်းမိတဲ့ စင်္ကာပူကို နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ ချီးကျူး
ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာလည်ပတ်စီးဆင်းနေမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘောလုံးလောင်း ကစား လုပ်ငန်း ကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေသူ အဖမ်းခံရပါပြီ တဲ့။
အဖမ်းခံရသူဟာ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား Tan Seet Eng ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖမ်းလိုက် တဲ့ စင်္ကာပူထောက် လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေကိုလည်း နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာပိုက ဒီကနေ့ ချီးကျူးလိုက် ပါတယ်။
အဖမ်းခံခဲ့ရတာကတော့ စုစုပေါင်း ၁၄ ဦး ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသား ၁၂၊ အမျိုးသမီး ၂။
မနေ့က စင်္ကာပူပြည်ထဲရေးဌာနအဆိုအရ ... ဖမ်းထားသူများထဲက ၉ ယောက်ကို အာမခံနဲ့ လွှတ်လိုက်ပြီ၊ ၅ ယောက်ကိုတော့ ဆက်ပြီး မေးမြန်းစစ်ဆေးနေဆဲပါပဲ တဲ့။
ဥပဒေအရ ဆိုရင် သူတို့ ၅ ယောက်ကို ၁၆ ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်အရ ဆိုရင် စင်္ကာပူအခြေစိုက် လောင်းကစားလုပ်ငန်းကြီးက ကိုင်ထားတာ ဥရောပတိုက်တခုတည်းမှာတင် ဘောလုံးပွဲပေါင်း အနည်းဆုံး ၃၈၀ ရှိနေတယ် ဆိုပဲ။ ယူရို ၈ သန်းလောက်တော့ အနည်းဆုံး ရသွားခဲ့ပါတယ် တဲ့။
ကမ္ဘာလွှမ်းပတ်ဆက်နွယ်နေတဲ့လောင်းကစားကွန်ရက် ဆိုတော့ ရတဲ့ အမြတ်အစွန်းက အတော်လေး များတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ အင်း... သူတို့ကို အလိုရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာရဲအဖွဲ့လည်း များပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ဥရောပဖလား စတဲ့ ပွဲစဉ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာရှ အာဖရိက လက်တင်အမေရိကဒေသ လောင်းကစားမှုလုပ်ငန်း ထိစပ်နေတာ ပွဲစဉ်ပေါင်း သုံးရာ လောက် ရှိနိုင်မယ်လို့ သံသယ ရှိနေကြတာပါ။
သြစတေးလျ၊ အယ်လ်ဆယ်ဗေဒေါနိုင်ငံတို့မှာလည်း လောင်းကစားလုပ်ငန်းရှင်တွေရော ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ အားကစားသမားတချို့ကိုပါ ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါပြီ တဲ့။
အပြည့်အစုံကို ဧရာဝတီ ပင်မစာမျက်နှာက သတင်းတပုဒ် Interpol Laud Singapore’s Capture of Football Match-Fixing Mastermind http://www.irrawaddy.org/archives/44577 မှာ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။
Posted by drmyochit Wednesday, September 25, 2013, under အနုပညာ | No comments
ဗီင်္ဒီယိုကားများ ထဲတွင် သရုပ်သစ် များစွာကို လက်တွဲ ခေါ်ယူလျက် ပရိသတ်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ နေရာ တစ်နေ ရာ ရှိခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ က ပရိသတ်တွေ အတွက် သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို ကြိုးစားလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ သူမ ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ လူတွေ ပြောနေ ကြတဲ့ ကောလာဟလ ကို '' လူတွေ က တော့ တစ်စိတ်ကို တစ်အိတ်လုပ်ပြီး ပြောကြာတာပေါ့ ၊ တစ်စိတ် မရှိရင် တော့ တစ်အိတ် ဆို တာ ဖြစ်မလာပါဘူး ၊ တစ်စိတ် မဖြစ်အောင် တော့ ဂရုစိုက် နေရမှာပေါ့ .. .. '' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိ ရိုက်နေရတဲ့ ကာရိုက်တာ လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လည်း '' မင်းသမီး နှစ်ယောက် အပြိုင် သရုပ်ဆောင် ရတဲ့ ကဏ္ဍလေးတွေ ပါဝင်ရတာ ကောင်းပါတယ် ၊ ဇာတ်လမ်းလေး တွေလည်း ကောင်းတယ် ၊ တက် ညီ လက်ညီလည်း ရှိတော့ ပိုကောင်း တာပေါ့ .... " ဟု ဆိုသည်။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ် နှင့် ဒေါ်စု ဥပက္ခာပြုထားသော ရခိုင်လူထုအား သူရဦးရွှေမန်း သွားရောက်တွေ့ဆုံမည်
ရခိုင်လူထုနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းတွေ့ဆုံပွဲကို ယခုလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ထိုတွေ့ဆုံပွဲသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၁၇ မြို့နယ်မှ တစ်မြို့နယ်လျှင် ကိုယ်စားလှယ် ၃ဦးစီ၊ ရခိုင်တိုင်း ရင်းသား ၀န်ကြီး ၊ ဒေသရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ တတ်ရောက်မည် ဟုသိရ သည်။
ထိုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ရံပုံငွေကိစ္စ၊ တိုင်းရင်းသားဥပဒေကိစ္စများကို ဆွေးနွေးရန်ရှိကြောင်း ထိုတွေ့ဆုံပွဲသို့တတ်ရောက်မည့် ဒေသကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးဦးဇော်အေးမောင်က တွေ့ဆုံပွဲသည် သာမန်တွေ့ဆုံပွဲသာဖြစ်ပြီး သူရဦးရွှေမန်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ မလာဖြစ်သည့်အတွက် ရန်ကုန်တွင်ပြုလုပ် ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ရေကြီးမှုကြောင့် လူဦးရေ သုံးသောင်းကျော် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် နေထိုင်ရဆဲဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီနှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးများ၌ ရေဖုံးလွှမ်းနိုင်မှု အလားအလာ ဆက်လက်မြင့်တက်နေကြောင်း ထုတ်ပြန်
တာမွေမြို့နယ်အတွင်း ရေကြီးရေလျှံနေမှု မြင်ကွင်းအား စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အောင်မျိုးသန့်)
စက်တင်ဘာ လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ရေကြီးမှုများ ကြုံတွေ့လာရကာ ရေကြီးမှုများကြောင့် လူဦးရေ သုံးသောင်းကျော် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း များတွင် နေထိုင်နေကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရှိရသည်။
ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် ရေဘေးသင့်သူများ နေထိုင်နေရဆဲ ကာလတွင်ပင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ရေဖုံးလွှမ်းနိုင်မှု အလားအလာမှာ ဆက်လက်မြင့် တက်နေကြောင်း Myanmar Climate Change Watch က သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရ သည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အရှေ့ဘက်မှ တိုက်ခတ်လာသည့် လေပွေလှိုင်းများကြောင့် မိုးများဆက်တိုက် ရွာသွန်း ကာ ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားနေပြီး ရန်ကုန်တိုင်း အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း အရှေ့တောင် ပိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်း တောင်ပိုင်းစွန်းတို့တွင် ရေဖုံးလွှမ်းနိုင်ခြေ ဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ကြောင်း Myanmar Climate Change Watch က စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ နေရာငါးနေရာတွင် လည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေရာ ရှစ်နေရာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်နှင့် မအူပင်မြို့တွင် နေရာခြောက်နေရာ၊ စုစုပေါင်း နေရာ ၂၀ တို့ တွင် ရေကြီးနိုင်မှု အလားအလာ မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
"အခု အချိန် က တောင်ပြန်လေကာလ မဟုတ်တော့ပေမယ့် အရှေ့လေပွေလှိုင်းတွေရဲ့ကာလ ဖြစ်နေ ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ အရှေ့ဘက်က ရွေ့လာတဲ့ မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန် တိမ်တိုက်တစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကို ဖြတ်သွားခဲ့လို့ တနင်္သာရီတိုင်းမှာ ရေတွေကြီးခဲ့ပါတယ်။ မွန်ပြည်တို့ ကရင်ပြည် တို့တောင် အဆစ်ပါလို့ မြ၀တီတောင် ရေတွေကြီးခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီတိမ်တိုက်က မြောက်ဘက်ပိုင်းကို ဦးတည်နေပြန်တယ်" ဟု Myanmar Climate Change Watch မှ ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်က ပြောကြား ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မိုးဆက်တိုက် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ဒုဋ္ဌ၀တီ မြစ်ရေတို့မှာ စိုးရိမ်ရေမှတ် အထက် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ မြစ်ကမ်းဘေးရှိ ကျေးရွာအချို့မှာ ရေမြင့်တက်လာသည့်အတွက် ကျေးရွာ လုံးကျွတ် ပြောင်းရွှေ့မှုများပင် ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာမှာ ဆင်းရဲမှုနဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် မူးယစ်မှောင်ခိုကူးမှု ပိုများလို့ဆို
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ​ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ​လက်နက်ကိုင် ​ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ​ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုတွေနဲ့ ​မူး ယစ်ဆေး ​မှောင်ခိုကုန်ကူးမှုတွေပိုမို ​များပြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ ​မြန်မာနိုင်ငံ ​ရဲချုပ် ​ဇော်ဝင်းက ​အရှေ့တောင် အာရှ ​အာဆီယံ ​နိုင်ငံများအသင်း ​၃၄ ​ကြိမ်မြောက် ​အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲမှာ ​ပြောသွား ခဲ့ပါ တယ်။
ဒီလို ​ဘိန်းစိုက်ပျိုး ​ထုတ်လုပ်မှုတွေ ​ရော့ကျ ​ပပျောက် ​သွားဖို့ ​အတွက်နဲ့ ​ဒေသထဲမှာရှိတဲ့ ​လူတွေ ​ဆင်းရဲ ​မွဲတေမှု ​လျော့ချရေးနဲ့ ​လူမှုအဆင့်တန်း ​မြင့်တင်ရေး၊ ​ကျန်းမာရေးနဲ့ ​ပညာရေး ​မြင့်တင် ​ပေးဖို့အတွက် ​ရည် ရွယ်ပြီးတော့ ​ဘိန်းအစားထိုး ​သီးနှံ ​စိုက်ပျိုးမှု ​အစီအစဉ်တွေကို ​အကောင်အထည် ​ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် ​ထိုင်းနိုင်ငံ ​တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ​ကုလသမဂ္ဂ ​မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ​ရာဇ၀တ်မှု ​နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့နဲ့ ​ပူးတွဲ ​လုပ်ဆောင်နေ တယ်လို့ ​လည်း ​ရဲချုပ် ​ဇော်ဝင်းကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒါအပြင် ​လွန်ခဲ့တဲ့ ​ခြောက်နှစ်က ​စပြီးတော့ ​amphetamine ​ခေါ် ​စိတ်ကြွဆေးပြား ​မှောင်ခိုကုန်ကူးမှုတွေ ​ပိုမိုတိုးလာတဲ့အကြောင်း၊ ​များသောအားဖြင့် ​အိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေ ​၀င်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ​ရဲချုပ် ​ဇော်ဝင်းကပြောပါတယ်။ ​မူးယစ်ဆေးမှောင်ခို ​ကုန်ကူးမှုတွေကို ​ဖမ်းဆိးနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ ​အတွက် ​အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပူးပေါင်း ပြီးတော့ ​နယ်စပ်ဒေသမှာ ​စစ်ဆေးရေး ​ဂိတ်တွေပိုမို ​ချထားတယ်လို့လည်း ​ဆိုပါတယ်။
ပြီးတော့ ​အရှေ့တောင်အာရှ ​အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာ ​မူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝပပျောက်ရေးအတွက် ​ချမှတ်ထား တဲ့ ​သတ်မှတ်ချိန်ဟာ ​၂နှစ်သာ ​ကျန်တော့တဲ့အတွက် ​ဒေသတွင်းစီမံကိန်းအတွက် ​ရရှိတဲ့ အချက် အ လက်တွေ ကို ​အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ​မျှဝေကြဖို့နဲ့ ​တရားဥပဒေ ​စိုးမိုးရေးကဏ္ဍမှာ ​ပိုမိုတိုးချဲ့ ​ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် ဖို့ ​ရဲချုပ် ​ဇော်ဝင်းက ​အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို ​တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အာဆီယံ ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ ထဲမှာ ​ဘရူနိူင်း၊ ​ကမ္ဘောဒီးယား၊ ​အင်ဒိုနီးရှား၊ ​လာအို၊ ​မလေးရှား၊ ​မြန်မာ၊ ​ဖိလိပိုင်၊ ​စင်္ကာပူ၊ ​ထိုင်းနဲ့ ​ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ ​ပါဝင်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပွဲတွင် အဖွဲ့အားလုံး မပါဝင်ပါက အပစ်ရပ်ပြီးသည့် အဖွဲ့များပါ ပါဝင်ဖွယ် မရှိဟုဆို
တောင်ကြီးမြို့တွင် သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများ
လာမည့် အောက်တိုဘာလအတွင်း ပြုလုပ်မည်ဟု အစိုးရဘက်က ပြောကြားနေသော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခ တ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအားလုံး မပါဝင်ပါက အပစ်ရပ်ပြီးသည့် အဖွဲ့များလည်း ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးဖွယ် မရှိကြောင်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားသည်။
တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများမှာ အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံရေး ပြဿနာသာဖြစ်ပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲလိုက်ရုံနှင့် ပြီးဆုံးသွားမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ လိုချင်သည်မှာ အဓိက နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲသာဖြစ်ပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အားလုံး မပါဝင်ပါက အဓိပ္ပာယ် မရှိနိုင်သည့်အတွက် ၎င်းတို့အဖွဲ့ အနေဖြင့်လည်း ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးမည် မဟုတ်ကြောင်း အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူထားပြီးဖြစ်သည့် ကယန်းပြည်သစ်ပါတီမှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁)ဗိုလ်မှူးကြီး စောလွင်က ပြောကြားသည်။
"ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ အနေနဲ့ကတော့ အခြေခံ စဉ်းစားတာ နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ဒီအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကြီးမှာ အဖွဲ့အားလုံးပါဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့တလေ ကျန်တာကျန်ပါစေ။ နောက်မှထိုးခိုင်းမယ်။ ရှိတဲ့သူ ထိုးပါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဆန့်ကျင်တယ်။ ဥပမာ တစ်ခုပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ KIO မပါရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ချက်က လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး လုပ်တာဟာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကြောင့် ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ပစ်ပယ်ပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပဲ လုပ်လိုက်ကြ။ နောက်မှ ကြည့်လုပ်ပါ့မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မပါနိုင်ပါဘူး" ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး စောလွင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် သမ္မတနှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ် ရေးထိုးရန် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ စီစဉ်နေကြောင်း သိရပြီး ကာချုပ်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ပါကလည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် မယုံကြည်နိုင်ကြောင်း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် တပ်မတော်ရေးရာ ကိစ္စများကို ကာချုပ်ကသာ လုပ်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသည့် အချက်နှင့် လိုအပ်ပါက ကာချုပ်တစ်ဦးတည်း၏ သဘောထားနှင့် နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းခွင့်ရှိသော အချက်များကို စွန့်လွှတ်မှသာ ယုံကြည်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဗိုလ်မှူးကြီးစောလွင်က ဆိုသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ကတည်းက ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရရှိထားသည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP/SSA) နှင့် တိုက်ပွဲအကြိမ် ၁၀၀ ကျော်အထိ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း၊ ယခု စက်တင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်အထိ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား နေခြင်းများကြောင့် အောက်တိုဘာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဖြစ်ရန်ပင် မသေချာနိုင်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
"အခုထိ "၀" ကိစ္စတွေ၊ မိုင်းလားကိစ္စတွေ မရှင်းနိုင်သေးဘူး။ SSA ကိုလည်း မနေ့တစ်နေ့ကအထိ လိုက်တိုက်နေတုန်းပဲလေ။ အဲဒီတော့ အောက်တိုဘာမှာ လုပ်မယ့်ကိစ္စက စက်တင်ဘာအထိ မရှင်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်လေ" ဟု ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဆိုသည်။
"အပစ်အခတ် ရပ်တယ်ဆိုတာက ၁၅ ဖွဲ့လောက်ရပ်ပြီး တစ်ဖွဲ့က မရပ်ဘူးဆိုရင်လည်း ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ပြည်တွင်းစစ်ပဲလေ။ ပြီးရင် တိုက်ပွဲတွေက ပြန်ပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်လာဦးမှာပဲ။ အားလုံးရပ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲလေ။ အားလုံးမပါဘူး ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားရမှာပေါ့" ဟု ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ပါတီနာယက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆေထင်က ပြောကြားသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲစဉ်ကလည်း ၎င်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲစဉ်ကလည်း ၎င်းပါဝင်ကြောင်း၊ ယခုအစိုးရ လက်ထက်လည်း ၎င်းပင်ပါဝင်နေရကြောင်း၊ သို့သော် ယခုအချိန်အထိ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း၊ ယင်းအချက်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအပေါ် ယုံကြည်မှုကို သိရှိနိုင်ကြောင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆေထင်က ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် အဓိက လက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်သည့် အဖွဲ့မှာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အဖွဲ့ ပါဝင်လာနိုင်ရန် အောက်တိုဘာ ပထမပတ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။